San Htun's Diary: July 2011
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း လည်ပင်းလာညှစ်ရင် လျှာထွက်ပြ၊ လက်လုပ်သေနတ်နဲ့ပစ်ရင် ရင်ဘတ်လေးကို လက်ကလေးနဲ့ အုပ် ခေါင်းကလေး ငှဲ့ ပြီး သေနတ်မှန်သလိုလုပ်ပြ၊ လည်ပင်းရှေ့လက်ကို ကန့် လန့် လေးထားပြီး သေတယ်ဆိုတဲ့ အမူအရာလုပ်ပြီး ပြောင်ဖူးကြမှာပါ။ အခုလည်း ခွေးလေးက ပြောင်ပြတော့ ပြုံးမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ပြုံးရအောင် ဘလော့ကနေ ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
လာ အတူတူ ပြုံးလိုက်ရအောင် :) ။
ဇူလှိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၁။
စန်းထွန်း အရမ်းချစ်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဂျိုးဇက်လာမန်( ချစ်လွန်းလို့သူ့ အတန်းကို နှစ်ခါတောင် ပြန်တက်တား))က ညဖက်စောစောအိပ်ဖို့အမြဲတိုက်တွန်းပါတယ်။ သူ့ စောစောကလည်း ည၉နာရီခွဲ။ clear mind ၊ clarified ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သာ နက်နဲခက်ခဲတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ။ နောက်ကျမှအိပ်လို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် သူနောက်ကျမှ အိပ်ခိုင်းပါတယ်တဲ့။ သူက အမြဲပြောပေမဲ့ ဘယ်ကျောင်းသားမှ ည၉နာရီခွဲ မအိပ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ည ၁၂၊ ၁ နာရီအထိ စာကြည့်ရပါတယ်။ ဒါတောင် မပြီးလို့ ။
ည၉နာရီခွဲ အိပ်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာပါ။ အမြဲ ၁၁၊ ၁၂ နာရီမှ အိပ်တာ။ နယ်မှာတော့ ည၁၀နာရီလောက် အိပ်ကြပါတယ်။ မနက် ၆ နာရီဆို ထနေပြီ။ စောစောအိပ်၊ စောစောထ၊ အချိန်မှန် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အစားအစာတွေစား၊ သန့် ရှင်းတဲ့လေကို ရှူ၊ လမ်းလျှောက်၊ သစ်ရွက်တွေကိုလှည်း၊ အပင်စိုက်နဲ့နယ်က လူတွေက ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ စန်းထွန်းတို့ လည်း ဟိုင်းကြီးပြန်ရင် စောစောအိပ်၊ စောစောထ။ ၉ နာရီဆို မုန့် ဟင်းခါးတွေ ပြောင်ပြီ။
ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ ရန်ကုန်စတိုင် ည ၁၁၊ ၁၂ နာရီမှ အိပ်။ မနက် နေဖင်ထိုးမှထ။ မနက် ၆နာရီဆို ဘာမုန့် သည်မှ မဖွင့်သေးဘူးလေ။ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ရန်ကုန်လို ကျင့်ရတာပေါ့။
KMD မှာ IDCS တက်တုန်းက စာသင်ရင် အမြဲအိပ်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတယောက် ရွှေတံဆိပ်သာရသွားတယ် စာတခါမှ ကြည့်တာလည်း မတွေ့ လိုက်ဘူး။ NUS တုန်းကလည်း ရွှေတံဆိပ်ရတဲ့ကောင်လေးဆို ဂိမ်းပဲဆော့နေတာ။ မာစတာ ဘရိန်းတွေကိုး။
မာစတာဘရိန်း မဟုတ်တဲ့ စန်းထွန်းကတော့ ညဏ်မကောင်းတော့ ဝီရိယ သူများထက် ပိုရပါတယ်။ သူများတွေ ၁ နာရီ စာကြည့်ဖို့အချိန်ပေးရရင် စန်းထွန်းက ၂ နာရီ ပေးရတယ်။ တချိန်လုံး စာလုပ်နေတာတောင် အမှတ်က သူများတွေလောက် မကောင်းဘူး။ မကြီးကတော့ ညဏ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဝီရိယအားနည်းတယ်။ စာကျက်မယ်ဆိုရင် အိပ်ငိုက်တော့တာပဲ။ သူ အိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင် စာကြည့်လိုက် အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ စာကျက်တာ သူ့ အတွက် အိပ်ဆေး။ စာမလုပ်တာတောင် စာမေးပွဲဖြေရင် အမှတ်ကောင်းကောင်းရတယ်။ ဒုတိယအမှတ်အများဆုံး။ ပထမနဲ့တမှတ်ပဲ ကွာတယ်။ သူ့ လို ညဏ်ရည်နဲ့စန်းထွန်းလိုမျိုး ဝီရိယသာ ပေါင်းလိုက်လို့ ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။
မောင်မောင်ကတော့ ညဏ်လည်း အကောင်းကြီးမဟုတ်၊ ဝီရိယလည်း မကောင်းပေမဲ့ ကံကောင်းတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ သူ့ ကို ကျမယ်ထင်တာ သူက အောင်ပြီး အောင်မယ်ထင်တဲ့သူက ကျလေရဲ့ ။ စင်္ကာပူကိုလည်း ကြိုးစားစရာမလိုဘဲ ဖေ၊ မေကို လိုက်ပို့ ပေးရလို့ရောက်လာပြန်တယ်။ သင်္ဘောသားဝင်ခွင့်လျှောက်တော့လည်း second mate ရဲ့သားက ဝင်ခွင့်ပြုတ်ပြီး သူက ဝင်ခွင့်ရတယ်။ အိမ်မှာ ပြောကြတာက မောင်မောင့်ကံက မသေးဘူးတဲ့။
တခါတလေတော့လည်း စိတ်တိုမိတယ်။ ငါ ဒီလောက် လုပ်တာတောင် ဘာလို့အမှတ်မများရတာလဲလို့ ။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့မလုပ်ပြန်ရင်လည်း ပိုဆိုးတော့မှာလေ။ မာစတာဘရိန်းတွေလို တချိန်လုံး အိပ်နေပြီး ရွှေတံဆိပ်ရချင်မိတယ်။ ကိုယ့်ကံပဲပေါ့။
ခုတော့ Do Less. Accomplish More. ဆိုပေမဲ့ Do More. Accomplish Less. ဖြစ်နေပါကြောင်း။
ဇှုလှိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၁။
စင်္ကာပူကကျောင်း ပြီးသွားလို့အလုပ်ရှာတုန်းကတော့ ဘယ်သူကဖြင့် အလုပ်ရသွားပြီဆိုရင် အလုပ်မရသေးတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် ဘုရားစင်ရှေ့ဖင်ဘူးတောင်းထောင် ရှိခိုး၊ အလုပ်တွေ ဖိလျှောက်( ဒါပဲ လုပ်လို့ ရတာကိုး)။ အလုပ်ရပြီး PR(Permanent Residence)တင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ပီအာတွေကို ကျပ်နေပြီ။ တရုတ်တွေနဲ့ကုလားတွေလောက်ပဲ ပီအာရတယ်။ မြန်မာအကုန်လုံးက reject။ တော်လို့အင်တန်းဆင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ offer ကမ်း၊ အလုပ်ရှာစရာတောင် မလိုတဲ့သူတွေ၊ gold metal ရတဲ့သူတွေတောင် ပီအာ reject ဆိုတော့ ကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ ဝေးပါသေး။ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း လည်း reject။ CPF မထည့်ရတော့ ပိုသုံးရတာပေါ့။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ reject ဆိုတာ ကြားရတိုင်း ဘယ်သူကတော့ reject တဲ့ဟေ့ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ သတင်းပေးကြသေးတာ။ တော်တော်များများ approve ဖြစ်ပြီး reject ထဲမှာ ကိုယ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ ခုတော့ ပျော်စရာကြီး။ တပြုံလုံး reject :) ။
တရုတ်အကိုကြီးတယောက် အမှတ်နည်းသွားလို့advanced တန်းကနေ basic တန်းကို တို့ တွေနဲ့လာတက်နေပါတယ်။ တရုတ်တွေ အားလုံးက အရမ်းအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ လာတဲ့ တရုတ်တွေထဲမှာ သူက အသက်အကြီးဆုံးနဲ့experience အများဆုံး။ ဂျပန်မှာ ၁၀နှစ်ကျော် experience ။ ဂျပန်ဆိုတာက သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်အရမ်းလုပ်ကြတာ။ အရင်တုန်းကတော့ programmer လုပ်ဖူးမှာပေါ့။ ခု project manager ဆိုတော့ coding တွေ မေ့နေမှာပေါ့။ စာမေးပွဲဆိုတာလည်း ခက်သားလား။ ကိုယ်ဖြေတာနဲ့ဆရာအမှတ်ပေးတာနဲ့တည့်တည့်တိုးမှ။ အလုပ်ထဲမှာကတောင် အေးအေးဆေးဆေး ရေးနေလို့ ရသေးတယ်။ စာမေးပွဲမှာက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်မှ။
သူငယ်ချင်းတွေ အေရတော့လည်း အားကျမိပါတယ်။ သူတို့ လိုမျိူး အေရချင်မိပါတယ်။ တချို့ ဘာသာတွေဆိုရင် အကျများတာများ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ကျတာတဲ့။ ပျော်စရာကြီး တပျော်တပါး ကျကြတာ။ သူငယ်ချင်းတွေ အမှတ်နည်းသွားလို့ပြန်တက်ရဦးမယ်လို့ကြားရတိုင်းလည်း အဖော်ရှိပြီဆိုပြီး အားရှိနေမိပါတယ်။ ဟိုကကြားရင် ငါ့တော့ သောက်ညင်ကပ်ပြီး လည်ပင်းလာညှစ်ချင်စိတ်ပေါက်မှာ။ သူများ အမှတ်နည်းတာကို အဖော်ရှိပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာနေလို့:) ။
လူသားထဲက လူသားတယောက်ပေမို့အားကျစရာရှိတာကို အားကျပြီး ဝမ်းသာသင့်တာကို ဝမ်းသာနေပါကြောင်း။
ဇူလှိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၁။
မနက်စာ၊ နေ့ လည်စာ စားတိုင်း ဟိုဟာလည်း မကြိုက်လို့မစား၊ ဒီဟာလည်း မကြိုက်လို့မစားနဲ့ခေါင်းခါနေတတ်တဲ့ ရာမားကို တို့ သုံးယောက် ဝိုင်းပြောတာက "eat more"။ ဖေ၊ မေတို့ ကို တို့ ညီအမ ဖုန်းဆက်ရင် မေက မကြီးကိုဆို "များများစား"လို့ပြောတတ်ပေမဲ့ စန်းထွန်းကိုတော့ "အစားဆင်ခြင်"တဲ့။ ဒီလို ပြောရတာလည်း ဒီလို ရှိပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက မကြီးနဲ့မောင်မောင်ကို ထမင်းခွံ့ ရင် တပန်းကန်ပဲ ကုန်ပေမဲ့စန်းထွန်းကိုတော့ သုံးပန်းကန် ခွံရတာတဲ့။ ထမင်းစားရင်လည်း ဖိုးဖိုးစားကတည်းက စားလိုက်တာ ဖေ၊မေတို့ထမင်းဝိုင်း၊ အလုပ်သမားတွေ ထမင်းဝိုင်းအထိ စားလို့မပြီးသေး။ နယ်မှာ အစားအသောက်ကလည်း ပေါတော့ ကြိုက်ရင် အကုန်စား။ ပုသိမ်ရောက်တော့မှ စကေးနဲ့စားတတ်သွားတာ။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ အသန့် ကြိုက်တဲ့မကြီးက လမ်းဘေးစာဆို မတီးဘူး။ စန်းထွန်းကတော့ လမ်းဘေးစာလည်း မရှောင် အကုန်တီးတာပဲ။ ဝေကတောင် "စန်းထွန်းက တချိန်လုံး စားဖို့ ပဲ စဉ်းစားနေတာ မကြီး"လို့တိုင်သေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့အစားမရှောင်၊ အကုန်တီးတဲ့ စန်းထွန်း မင်းလမ်းက မုန့် တီသုတ်စား၊ အိမ်ရောက်တော့ မေတို့ဟိုင်းကြီးကနေ ယူလာတဲ့ ခက်တဲ့(ပြည်ကြီးငါး)ကြော်တွေ စား၊ အဲဒါတွေက ဗိုက်ထဲမှာ ဖိုက်ကြတော့ စန်းထွန်းတယောက် ဝမ်းသွားပါလေရော။ ဗိုက်ထဲက ရစ်ရစ်နာပြီး အောင့်တာပါ။ အိမ်သာကို ငါးခါလောက် သွားပြီးချိန်မှာတော့ လူက မျော့မျော့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
ချမ်းလာပြီး စောင်အထပ်ထပ် ခြုံပြီး ညည်းနေတော့တာ။ ည ၂ နာရီလောက် ရှိပါပြီ။ ဆေးခန်းသွားရအောင် ဒီအချိန်ကြီး။ ဖေက ခြေဖဝါးကို လာဖျစ်ပေး၊ ဆေးလိမ်းပေးတော့ ချမ်းတာတွေ သက်သာပြီး အိပ်ပျော်တော့တာ။ မေကတော့ အစားသောင်းကျန်းလို့ဖြစ်တာလို့ဆူလေရဲ့ ။ မောင်မောင်က လာစောင့် အိပ်ပေး။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကောင်းသွားရော။
တုတ်ကွေးရာသီမှာ ဖျားလို့သီရိ၃လမ်းက ပြနေကျဆရာဝန်ဆရာဦးသိန်းဟန်ဆီမှာ သွားပြပါတယ်။ ဆရာက ဆေးလုံးဝ မထိုးဘူး။ ဆေးပဲ သောက်ရတာ။ နောက်နေ့အဖျားအရမ်းကြီးပြီး အပူတွေ အရမ်းတက်တော့ မကြီးခမျာ ကြောက်ပြီး မေ့ကို ဖုန်းဆက်တော့ မေက ချက်ချင်းပဲ ရန်ကုန်တက်လာပါတယ်။ မေပြောတာက စန်းထွန်းက ဖျားခဲတယ်၊ ဖျားရင်ပဲ အသည်းအသန် ဆေးရုံရောက်ပဲတဲ့။ ဆရာ့ဆေးကို ၃ခွက်လောက် သောက်ရင် သက်သာပါတယ်။ ခု မသက်သာတော့ အူရောင်ငန်းဖျားနဲ့တူတယ်၊ ဘာအဖတ်မှ မစားနဲ့ ၊ သွေးသွားစစ်တဲ့။ သွေးသွားစစ်တော့လည်း အူရောင်ငန်းဖျား မဟုတ်။ ချက်နဲ့တင်ပဆုံးရိုးကြားထဲ လက်နဲ့ထိုးရင် နာပါတယ်။ အူအတက်ရောင်တာတဲ့။ လမ်းဘေးစာတွေ၊ မသန့် တဲ့ လက်သုပ်၊ ငရုတ်ချဉ်ရည်တို့စားမိလို့နေမှာတဲ့။ ခွဲမလား၊ ဆေးသောက်မလားဆိုတော့ ဆေးသောက်တာကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ စာမေးပွဲက နီးနေပြီလေ။
အဖတ်မစားရ အရည်တွေပဲ သောက်ရတော့ တော်တော့်ကို ပိန်သွားတာ။ သူငယ်ချင်းတွေဆို ကိုယ့်ကို မြင်ရတာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်လွန်းလို့အရင်ဝဝဖြိုးဖြိုးလေးကနေ ပိန်ပိန်ညောင်ညောင်လေးဖြစ်သွားလို့ တဲ့။ အဲဒီကတည်းကစလို့အရမ်းကြိုက်တဲ့ လက်သုပ်တွေ၊ ငရုတ်ချဉ်ရည်၊ ချဉ်ဖတ်၊ ငရုတ်သီးအပူအစပ်တွေကို ရှောင်ရတော့တာပဲ။ သူများစားတိုင်း သားရေယိုရတာပေါ့။ အဲဒီကတည်းကစလို့မေက မကြီးကို "များများစား"ဖို့မှာပေမဲ့ စန်းထွန်းကိုတော့ "အစားဆင်ခြင်"တဲ့။ အိမ်ရဲ့လက်သုံးစကားက "များများစား၊ အားရှိမှ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ"တဲ့။
စင်္ကာပူကိုရောက်တော့ အစားအသောက်တွေက သန့် တော့ ဘာမှမရှောင် တီးတော့တာပေါ့။ နေရာတိုင်းမှာ foot court ရှိတော့ ချက်မစားချင်ရင် ဝယ်စားလိုက်ရုံပါပဲ။ မလေး၊ အင်ဒိုနီးရှားအစားအစာတွေကလည်း မြန်မာအစားအစာနဲ့အတော်တူပါတယ်။ ကိုရီးယားစာ၊ ဂျပန်စာ အကုန်ကြိုက်။ စင်္ကာပူမှာတော့ ထမင်းလေးလက်တဆုပ်လောက် ကျန်ရင်တောင် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်၊ စားခါနီးမှ မိုက်ခရိုဝေ့ထဲ ထည့်နွေးစား။ မကြီးကလည်း စည်းကမ်းရှိ စနစ်ကျတော့ ဘာမှ ပစ်ရက်စရာကို မရှိတာပါ။ စားလို့ ကုန်ရင် ကုန်ပစေ၊ လွှင့်ပစ်ရရင်တော့ အတော်နှမြောဖို့ ကောင်းတာပါ။
အလုပ်က ဘော်ဒါတွေနဲ့နေ့ လည် ထမင်းသွားစားရင် မကုန်လို့ချန်တာတွေ့ ရင် သူတို့ က အာဖရိကလူတွေကို သတိရပါလို့ပြောတတ်တော့ ကုန်အောင် တီးရပါတယ်။ မကြီးကလည်း ပြောတတ်တယ်။ စန်းထွန်း "အပြတ်ရှင်းလိုက်"တဲ့။
အမေရိကန်စာတွေကတော့ ငန်ပြီး ကိတ်မုန့် တွေကလည်း သကြားခဲကို စားရသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း အမေရိကန်တွေ သွေးတိုးဆီးချိုအဖြစ်များပြီး အဝလွန်တွေ များတာလည်း မပြောနဲ့ ။ ဘာမဆို စားနိုင်ပါတဲ့၊ ဘယ်တော့မှ မပိန်တဲ့ စန်းထွန်းတောင် ၂ ကီလို၊ လေးပေါင် ကျတာ ကြည့်တော့။ တီချယ်သူဇာဆို ၁၀ပေါင် ကျတာတဲ့။ မတူညီတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကြောင့် ဆူနမ်ကျတော့ ဝလာပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ရောက်မှ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ဖူးတဲ့ စန်းထွန်း အိမ်က သင်ပေးပေမဲ့ အရသာမသိ၊ ဘာစားစားကောင်းနေတော့ ကိုယ်ချက်တာလည်း ကောင်းတယ်ထင်တာပေါ့။ တခါက လက်စွမ်းပြလိုက်တာ ဘယ်သူမှ မစားနိုင်။ မောင်မောင်ကတော့ ဘယ်လောက်တောင် အရသာသိလဲဆိုရင် အင်း ငန်မဲ့ ပုံပဲ၊ ချဉ်နေပြီနဲ့အိမ်ရှေ့ ကနေ အနံ့ ကို ရှူရင်း ခန့် မှန်းနေတာ။ သူ့ ကို ဟင်းမြည်းခိုင်းရတယ်။ "မကြီးကို ရတဲ့ ယောက်ျားကတော့ အတော်ကံကောင်းမှာ"လို့မြှောက်ပေးရင်း စန်းထွန်းစားချင်တာတွေကို မကြီးကို ချက်ခိုင်း။ အစပ်မစားနိုင်တဲ့ စန်းထွန်းအတွက် ဖေက သရက်သီးငါးပိထောင်းကို အစပ်လျှော့ ပြီး ထောင်းပေးတတ်ပါတယ်။ မေ့ရဲ့ကန်းစွန်းရွက်၊ ချဉ်ပေါင် ဟင်းလှော်ဟင်းကိုတော့ ဘယ်သူမှ မမှီတာပါ။ မောင်မောင်ကတော့ ကြက်ဥကြော် expert လို့တို့ ညီအမတွေ ညာညာခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ခုတော့ ညာညာ ခိုင်းရမဲ့သူမရှိ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပဲ။ ပျင်းရင် ငတ်ပဲ။ မီးဖိုချောင်မှာ ချက်လို့ ရပေမဲ့ တယောက်စာလေးကို လုပ်ရတာများများ၊ သူများတွေ ချက်ထားတာကို ရှင်းပေးရတာများများဆိုတော့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားနေပါတယ်။
ဟိုဟာစားကောင်းနိုး၊ ဒီဟာစားကောင်းနိုးနဲ့သယ်လာပေမဲ့ မစားနိုင်ဘဲ အများကြီးကျန်တာကိုမြင်ရင် အာဖရိက က လူတွေကို သတိရပေမဲ့ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တာပါ။ ခုတော့ မကြိုက်တာတွေကို ကြိုက်အောင် ကြိုးစားရင်း "များများစား"နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းပါ။
ဇူလှိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၁။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်း သူတို့ ပျော်လို့ကျောင်းတက်နေသလားလို့စပ်စုမိပါတယ်။
မကြီးတို့ACCA လောက က လက်သုံးစကားက "မစလေနဲ့ ။ စရင် ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး"တဲ့။ တကယ်လည်း စရင် မဆုံးတော့ပါဘူး။ တချို့ ဘာသာ(၃.၂၊ ၂.၆)တွေဆို တော်တော်ခက်တာ။ အနည်းဆုံးလေးခေါက်ဖြေမှ အောင်တာ။ စာမေးပွဲကြေး၊ အင်္ဂလန်က အသင်းဝင်ကြေး၊ စင်္ကာပူက အသင်းဝင်ကြေးနဲ့အတော်ဈေးကြီးပါတယ်။ ပညာဆိုတာ ပိုက်ဆံနဲ့ မှ ဝယ်ရတာပါ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် ဒီခေတ်မှာ ပညာမတတ်ပါ။ စာမေးပွဲနီးရင် အပူရုပ်ပေါက်နေတဲ့ မကြီးကို တွေ့ ရပါမယ်။ အပါးဆုံးအင်္ကိင်္ျဝတ်ပြီး အဲကွန်းဖွင့်ထားပေမဲ့ ပူနေပါတယ်(စာမရလို့ )။ မောင်မောင် တီဗွီသံက ဆူလိုက်တာ(အမှန်က ပုံမှန်ပါပဲ) တိုးတိုးဖွင့်စမ်းလို့မာန်မဲရင် ငြိမ်နေရပါတယ်။ စာကျက်လို့ခဏနေရင် ဟိုဟာ စားချင်သလို၊ ဒီဟာ စားချင်သလို ဖြစ်လာပါတယ်။ မကြီး စားချင်တာဆို အားလုံးက သွားဝယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ သူ့ ခမျာ စာမေးပွဲနီးပြီကိုး။ ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲဆိုတာကို စိတ်ကုန်လို့ဒီတခေါက်တော့ မဖြေဘဲ နားလိုက်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေ အောင်ပြန်တော့လည်း သူများနောက် နောက်မကျချင်တာနဲ့ ပဲ ကျောင်းပြန်တက်ကြလေသတည်း။
ရုံးက ဝင်နာတို၊ အီရာ(အင်ဒိုနီးရှားတွေ)NUS ၊ NTU မှာ မာစတာတွေ တက်နေကြပါတယ်။ အီရာက ရာထူးကြီးကြီးရချင်ရင် အမြဲလေ့လာနေမယ်တဲ့။ မလေးမလေး ထိန်ထိန်ကတော့ ပြတ်သားတယ်။ "ကျောင်းလုံးဝ မတက်တော့ဘူး"တဲ့။ သူလိုမျိုး မပြတ်သားနိုင်တော့လည်း ကျောင်းတက်နေရတယ်။
သူဋ္ဌေးမလေးတယောက် စင်္ကာပူနဲ့မြန်မာပြည်ကုမ္ပဏီတွေကို ဦးစီးရင်း စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်၊ သြစတေးလျမှာ မာစတာဘွဲ့ ယူ။ ခုလည်း အွန်လိုင်းကနေ PhD တက်နေပြီး အမေရိကားကို ပါရဂူဘွဲ့သွားယူမယ်လို့ကြားပါတယ်။ သူ့ လောက် ချမ်းသာရင် ကျောင်းမတက်တော့ဘူး။ အေးဆေးပဲ နှပ်နေမယ်လို့:D ။
အသိအမတယောက် ကုမ္ပဏီကြီးကြီးမှာ ရာထူးကြီးကြီး၊ လစာကလည်း အတော်များများ။ သူ့ အမျိုးသားကလည်း လစာကောင်းကောင်း။ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ သမီးလေးနဲ့ ။ အလုပ်တွေ အရမ်းများတဲ့ကြားထဲက စာမေးပွဲတွေ ဖြေနေတဲ့ အမကို မြင်ရတော့ စူပါမိန်းမလို့အားကျမိပါတယ်။ သူ့ လို ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတယောက်(သူက ရိုး ၂) ပါရဂူဘွဲ့ ကို NTU မှာ တက်နေတာ ကြားရတော့ အားကျမိပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ မာစတာကိုတောင် လက်ပစ်ကူးနေရတာ။ သူ့ လိုပါရဂူဘွဲ့ ဆိုရင်တော့ ဂျွှမ်းပစ်နေမလား မသိ။
၈ နှစ်သမီးလေးရဲ့ အဖေက ပိုလီကျောင်းတက်နေတာ PR ရချင်လို့ ၊ ရာထူးတိုးချင်လို့ ပါတဲ့။ အသိအမတယောက်ကတော့ ပါရဂူဘွဲ့ တက်တာ လစာ သောင်းချီရချင်လို့ ပါတဲ့။ အမတယောက်က အင်္ကြညဏ်ပေးပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုခင် မာစတာတို့ဘာတို့ ပြီးအောင် တက်ထား။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးမွေးရင် တက်ချင်လို့ တောင် တက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်ထောင်မပြုခင် တက်ချင်တာတွေ၊ လိုချင်တဲ့ဘွဲ့ တွေ အကုန်ယူထားတဲ့။
ဒုက္ခသည်အဖြစ် အမေရိကားကို ရောက်လာကြတဲ့ သူတွေကတော့ ဗီဇာဖိုးလည်း မကုန်၊ လေယာဉ်ခလည်း မကုန်။ အမေရိကန်အစိုးရက စိုက်ပေးထားပြီး နောင်ကျမှ လစဉ် ဆပ်ရတာ။ ကလေးတွေဆိုရင်လည်း ၁၈နှစ်အထိ အစိုးရက ထောက်ပံ့ပါတယ်။ လစဉ် အစားအသောက်၊ ထောက်ပံ့ငွေတွေ ပေးပါတယ်။ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ နာမည်သာ ဆိုးတာ၊ အခွင့်အရေးတော်တော် ရပါတယ်။ သူတို့ က ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးနေတော့လည်း ကျောင်းပြန်တက်ပေးရပါတယ်။ မြန်မာစာ ဖတ်တတ်ဖို့မပြောနဲ့မြန်မာစကားတောင် ကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့ အသက် ၅၀၊ ၆၀ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးတွေ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်းတွေ တက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ ပြောတာက "food stamp ရချင်လို့ " ကျောင်းတက်နေရတာတဲ့။
ဒုက္ခသည်တွေ တက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုရင် တနှစ်စာ ထောက်ပံ့ငွေ ၅၀၀၀ နဲ့ကျောင်းသားခရက်ဒစ်ကတ် ရပါတယ်။ ကျောင်းလခလည်း ဖရီး။ အလုပ်မရသေးမဲ့ အတူတူ ကျောင်းတက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး လင်ရော၊ မယားရော ကျောင်းတက်ကြပါတယ်။ သူတို့ အဆိုအရ "ကျောင်းတက်စားတယ်" ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ grade B ရအောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်တွေ သားသမီးတွေနဲ့အပြိုင် စာလုပ်နေရတာ မြင်ရပါတယ်။သူတို့ ပြောတာက "ကျောင်းမတက်ချင်လည်း အခြေအနေပေးတုန်း တက်ထားမှ။ နောင် စီးပွားရေးပြန်ကောင်းလို့အလုပ်အကိုင်ပေါတဲ့အချိန်နဲ့ကျောင်းပြီးမဲ့အချိန် ကွက်တိ။"
အတန်းထဲမှာ အသက်ကြီးကြီး ခေါင်းဖြူဖြူPhD ဘရာဇီးက တို့ တွေနဲ့အပြိုင် ကျောင်းတက်နေပါတယ်။ သူဘာလို့ကျောင်းတက်နေသလဲ စပ်စုကြည့်တော့ သူ့ မေဂျာ management နဲ့အလုပ်ရဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ "အလုပ်ရအောင် career ပြောင်းချင်လို့ " ကျောင်းတက်နေပါသတဲ့။
နီပေါလေး အာဘီဆစ်က အမ်ဘီအေကို university of finlay အမေရိကားမှာ ပြီးခဲ့တာပါ။ ခု ဘာလို့တို့ တွေနဲ့ အတူ ကျောင်းလာတက်နေလည်း စပ်စုကြည့်မိပါတယ်။ contract ပြည့်တော့ အလုပ်ဟောင်းက ဆက်ပြီး မကမ်းလှမ်း၊ အလုပ်အသစ်ကလည်း မရ၊ ဒီကလည်း မခွာချင်တော့ "status(စတေး)ရှိအောင်" ကျောင်းဆက်တက်နေရပါသတဲ့။
အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွေကြောင့် ကျောင်းတက်နေကြပါတယ်။ စန်းထွန်းလည်း ကျောင်းတက်ချင်လို့ ၊ ပျော်လို့ ၊ ပညာလောဘကြီးလို့ကျောင်းတက်နေရတာ မဟုတ်ဘဲ မရည်ရွယ်ဘဲ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ကျောင်းတက်နိုင်သူကြီး ဖြစ်နေကြောင်းပါ။
ဇူလှိုင် ၂၂ ၊ ၂၀၁၁။
ကိုယ့်တို့UCSY ကနေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ စင်္ကာပူကို တဂျိမ်းဂျိမ်း ကျောင်းသွားတက်ကြတာ ကိုယ်က တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ ကိုယ်နဲ့လားလားမှ မဆိုင်သလို နေတာပါ။ ဟော မကြီးလည်း စင်္ကာပူကို ရောက်ရော မဆိုင်သလိုနေလို့မရတော့ပါဘူး။ ဆိုင်လာရပါပြီ။ မကြီးက စန်းထွန်း သူငယ်ချင်းတွေ ဘာကျောင်းတွေ တက်ကြတယ်ဆိုတာ စုံစမ်းပြီး ဖောင်ပို့ ပေးပြီး ကျောင်းလျှောက်တဲ့။ လျှောက်ဆိုလည်း လျှောက်ပေါ့။ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုလည်း ဖြေပေါ့။ အင်တာဗျူးဆိုလည်း ဗျူးပေါ့။
အဲဒီတုန်းက NUS က Post Graduate Dip in System Analysis နဲ့ NTU က Master of Information Studies,Information Science,Mass Communication လျှောက်ပါတယ်။ NUS က ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ၂၀၀၇ မြန်မာပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးသုတ်အဖြစ် MICT Park မှာ ချွှေးပြိုက်ပြိုက်ကျအောင် ဖြေခဲ့ရပါတယ်။ NTU ကတော့ အွန်လိုင်းကနေ essay ဖြေရတယ်။ မိနစ်၂၀ အတွင်း ဖြစ်ညှစ်ပြီး ဘာဖြေရမှန်းမသိတဲ့ essay ရေးရတာ။ အမေရိကန်သံရုံးက ဖူးဘရိုက်စကော်လားရှစ်လည်း ဖြေလိုက်သေးတယ်။ အမေရိကန်ဒီဗွီလည်း တင်တယ်။
"NUS ၊ NTU ကလည်း offer ကမ်း၊ ဖူးဘရိုက်စကော်လားရှစ်လည်း ရ၊ အမေရိကန်ဒီဗွီလည်း ပေါက်လို့ငါတော့ ဘာရွေးရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး"လို့အာရှောင်တာ သူငယ်ချင်း စန်းသိင်္ဂီက နားကြားကတ်လို့ နဲ့တူပါရဲ့ ။ "မဖြစ်နိုင်တာတွေ စိတ်ကူးမယဉ်စမ်းနဲ့ ဟယ်"တဲ့။
သူပြောသလိုပါပဲ NTU ကလည်း reject ၊ ဖူးဘရိုက်စကော်လားရှစ်ကလည်း မအောင်၊ အမေရိကန်ဒီဗွီလည်း မပေါက်။ သူများတွေ အင်တာဗျူးတွေ ခေါ်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ကို မခေါ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေချိန်မှာ နာဂစ်လည်း ဖြစ်ရော နိုင်ငံခြားကို ကျောင်းတက်ဖို့ ဆိုတာ ပိုဝေးပေါ့။ စက်ပစ္စည်းဆိုင်တဆိုင်လုံးနဲ့တော်တော်များများ ဆုံးရှုံးသွားတာ။ ဖေ၊ မေ အသက်မသေတာတောင် ကံကောင်းလှပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ NUS က offer ပေးလာတော့ ကိုယ့်မှာ အင်တင်တင်။ "ပိုက်ဆံအတွက် လုံးဝစိတ်မပူနဲ့သမီး ဖေတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်"၊ "ပျံချင်သလောက် မြင့်မြင့်ပျံစမ်း သမီး"လို့မေက ဝမ်းသာအားရ ပြောလာတော့မှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်မာသွားတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ စင်္ကာပူကို လာပြီး ကျောင်းလာတက်ရပြန်ရော။
အမြဲကျေနပ်မိတာက ပညာကို အားပေးတဲ့၊ ပညာကို အမွေပေးချင်တဲ့၊ လူတွေအပေါ် မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်တဲ့ ဖေ၊ မေတို့ ရဲ့သမီး၊ အမြဲကြိုးစားနေပြီး မောင်နှမတွေအပေါ် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတတ်တဲ့၊ မောင်နှမတွေက စံနမူနာယူရတဲ့ မကြီးရဲ့ညီမလေး၊ နည်းနည်းလေး ဆိုးပေမဲ့ များများလေး ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မောင်မောင်ရဲ့အမဖြစ်ရတာ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက စာကျက်ရင် ဘာမှ မခိုင်းတော့ စာကျက်ချင်ယောင်ဆောင်တာပေါ့။ သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်၊ စာအုပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှ မမေးဘဲ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတဲ့ ဖေနဲ့ မေ။ စာမေးပွဲဖြေနေချိန်ဆိုရင် အထူးအခွင့်အရေးတွေ ရတာ။ အဲဒီအချိန်ဆို ရွှေပုဇွန်ကိတ်တို့ ၊ ဇော်ကြေးအိုးဆီချက်တို့တောင်းဆိုတတ်တာ။ စာမေးပွဲလည်းပြီးရော အထူးအခွင့်အရေးတွေ ပိတ်။ ဆယ်တန်းတနှစ်လုံး မေ့မှာ ဟိုင်းကြီး မပြန်ရဘဲ စန်းထွန်းတို့ ကို ပြုစုနေရတာ။ ဖေကတော့ ပြုစုမဲ့သူ မရှိတော့ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဟင်းကောင်းကြိုက်တဲ့ ဖေ ညတိုင်း မုန့် တီနဲ့နှစ်ပါးသွားရပါသတဲ့။
စင်္ကာပူကို ဘွဲ့ လာယူတော့ ကျေနပ်ပီတိဖြာနေတဲ့ ဖေက "သမီးတွေကြောင့်သာ သူ့ မှာ ရောက်ဖူးတာ။ သူ့ ဘာသာသူဆို ရောက်ဖူးမှာ မဟုတ်လို့သမီးတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ"သတဲ့။ သမီးတွေလည်း "သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်တော်တော် မိဘမပံ့ပိုးနိုင်ရင် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တာ။ သမီးတွေ ဒီလိုဖြစ်တာ ဖေ၊မေတို့ ကြောင့်ပါ"လို့ပြန်ပြောတော့။ "ဟုတ်ပါပြီ မိဘနဲ့သားသမီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တော်လို့ ပါ"တဲ့။ (သူများ ချီးမွမ်းပေးစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ချီးမွမ်းနေကြတာ။ :D )
အမေရိကားကတော့ စင်္ကာပူလို အလည်လာပြီး အလုပ်ရှာဖို့မလွယ်ပါ။ အလုပ်ဗီဇာပေးတယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး အလုပ်အတွေ့ အကြုံဆယ်နှစ်လောက်ရှိမှ။ အလည်လာဖို့ တောင် မလွယ်တာပါ။ ကျောင်းတက်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်ပွန်းနောက်လိုက်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန်ဒီဗွီပေါက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒုက္ခသည်ဖြစ်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကားကို ရောက်လာကြပါတယ်။ ခင်ပွန်းလည်း မရှိ၊ အမေရိကန်ဒီဗွီလည်း မပေါက်၊ ဒုက္ခသည်လည်း မဟုတ်တဲ့ စန်းထွန်း ကျောင်းတက်ရုံမှတပါး အမေရိကားကို ရောက်စရာနည်းလမ်း မရှိပါ။ ဒီလိုနဲ့အမေရိကားကျောင်းကို မတော်တဆ ကံစွတ်ပြီးရ၊ ဗီဇာကလည်း တနင်္လာနေ့ တင်တာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရ၊ အားလုံးကလည်း ဝိုင်းမြှောက်ပေး(အချွှန်နဲ့ မ)တာနဲ့အမေရိကားကို လာပြီး ကျောင်းတက်နေပါတယ်။
ဖေ၊ မေတို့ မှာလည်း သနားစရာ။ သားသမီးတွေဆီက ရတယ်လို့မရှိဘူး။ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ လည်း ပေးပါဦး။
ကျောင်းပြီး အလုပ်လုပ်လို့အရင်ပိုက်ဆံတောင် ဖေ၊ မေတို့ ကို မဆပ်ရသေးဘူး။ ခုလည်း အမေရိကား ကျောင်းသွားတက်ဖို့ပေးပါဦး။ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရရင် အတိုးရော၊ အရင်းပါ ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ ခုတော့ပိုက်ပိုက်မရှိလို့စန်းထွန်းဆီကို ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါဦး ဖေ၊ မေ နဲ့မကြီးတို့ ရေ။
ကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုလို့မြန်မာပြည်က ရုပ်ရှင်ကားထဲကလို၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလို ဝေလေဝါးလားရိုက်ပြီး အချိန်တန်ရင် အောင်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။ စာကြည့်တိုက်မှာ စာသွားဖတ်၊ တသက်နဲ့ တကိုယ် ည ၁နာရီ၊ ၂ နာရီ အထိ စာမကြည့်ဘူး။ ခုတော့ ဟင့် ဟင့်။ စာအုပ်ထဲ ခေါင်းစိုက်နေမှ တန်ရုံကျတာ။ ဆရာတွေကလည်း လွယ်တာတွေ သင်ပြီး ခက်တာတွေ အိမ်စာပေး၊ လုပ်နိုင်တာထက် ပိုပေး။ စာမေးပွဲ ...စာမေးပွဲ...စာမေးပွဲ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ grade B ရအောင် လုပ်ရတာ။ သူတို့B ကလည်း ၈၅ ကနေ ၉၀ ကြားရမှ။ ဒီလောက် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ ကျောင်းသားဘဝကို။ ဘယ်သူက ပျော်လို့ကျောင်းတက်မှာလဲလို့ ။
တနေ့ဖုန်းဆက်လာတာက သူငယ်ချင်းရဲ့တူတော်မောင်တယောက်။ မြန်မာတွေဆုံလေ့ရှိတဲ့city hall မှာ ဆုံကြမယ်လို့ချိန်းလိုက်တယ်။ city hall ကို အသွား ဖုန်းဆက်လာတာက "အကို ကျနော် ဗင်နီဇွဲလား ရောက်နေတယ်။ အကို ဘယ်ရောက်နေလဲ" ဆိုတော့ ကိုယ်တောင် ကြောင်ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်။ မနေ့ ကပဲ စင်္ကာပူရောက်နေတယ်ဆိုပြီး ဒီနေ့ တော့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဗင်နီဇွဲလား ရောက်သွားပါလိမ့်။ "ဟေ့ကောင် မင်းဘယ်မှာလဲ" ဆိုတော့ "မြန်မာတွေ ဆုံလေ့ရှိတဲ့ နေရာလေ အကို" ဆိုတော့မှာ သဘောပေါက်တယ်။ ပင်နီဆူးလားကို ပြောမှန်း။ အတော်လာတဲ့အကောင်။ ပင်နီဆူးလားကိုတောင် ဗင်နီဇွဲလားဖြစ်အောင် ပြောတဲ့ကောင်။
ရောက်တော့ cv ပြပြီး အကြံညာဏ်တွေ တောင်းတာပေါ့။ ၈၇ ဘွန်း။ အသက်ကသာ ငယ်တာ ဗလက ခပ်တောင့်တောင့်ရယ်။ တောင့်မှာပေါ့ ဝိတ်မတာတဲ့။ ပညာအရည်အချင်းက သင်္ချာဘွဲ့ ရ။ အတွေ့ အကြုံက သင်္ချာနဲ့နှစ်နှစ်။ မရှင်းလင်းလို့မေးကြည့်တော့မှ သူ့ မိဘပွဲရုံမှာ စာရေးလုပ်ဖူးတာ။ ဟုတ်ပေသားပဲ အတွက်အချက်၊ ဂဏန်းပေါင်းရတော့ သင်္ချာသုံးရတာပဲ။ အလုပ်တော့ရမယ် မထင် (စိတ်ထဲက)။ သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်တော့ သူ့ မိဘတွေက ခပ်တောင့်တောင့်ဆိုတော့ အလုပ်မရလဲ ဘာအရေးလဲ စင်္ကာပူကို လာလည်တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေတာ ပြန်သွားပြီလားတောင် မသိ။ တနေ့ တော့ "အလုပ်ရပြီ အကို" ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ ဖုန်းဆက်လာရော။ "ဟေ ဟုတ်လား" ဝမ်းသာစရာပဲ။ "ဘယ်မှာတုန်း"။ "နိုက်ကလပ်မှာ လုံခြုံရေးအစောင့် အကို"။ "ည ၁၁ ကနေ မနက် ၅ နာရီထိ တပတ် တရက်နား"။ "လစာရော"။ "လစာက သိပ်မများပါဘူး အကို ၂၅၀၀"။
"ဟေ... ဂိန်..."။ "ဟေ" ဆိုတာက အံ့သြလို့"ဂိန်" ဆိုတာက တက်သွားတာ။
ရထားတဲ့ဘွဲ့ တွေ၊အလုပ်တွေကို လွှင့်ပစ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်တော့မယ်။ ဝိတ်မသင်တန်းသွားတက်မလို့ ။
(မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးထားတာပါ။)ပြောချင်တာက အဲလိုမျိုး ကံကောင်းတတ်သူလည်း ရှိတယ်လို့ ။
အတွေ့ အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကျောင်းတက်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေမှာက ကျောင်းတက်ရင်း၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားက တက္ကသိုလ်တွေ အရမ်းကွာပါတယ်။ အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေက ဝင်ခွင့်ခက်သလို ကျောင်းပြီးရင်လည်း အလုပ်ရ မြန်ပါတယ်။ NUS မှာ တက်တုန်းကဆို ကျောင်းတောင် မပြီးသေးဘူး PR(Permanent Residence) offer ကို အစိုးရ ပေးထားပြီ။ အလုပ်ရရင် PR တန်းလျှောက်ရုံပဲ။ student pass ကုန်သွားပြီး အလုပ်မရသေးရင်လည်း စတေးအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ ။ visit pass ထုတ်ပေးထားပြီး တလတခါ ၃လတခါ တိုးပေးပါတယ်။ အဲဒီထိမှ အလုပ်မရသေးရင် EPEC လျှောက် တနှစ်နေပြီး အလုပ်အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်လို့ ရတယ်။ အလုပ်ရမှ သူတို့ ဆီက ချေးထားတဲ့ ဘဏ်ကြွေးတွေ ဆပ်နိုင်မှာမလား။ ကျောင်းတက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ။
ကျောင်းတက်တော့ အလုပ်ထဲမှာ အထင်မသေးခံရဘူးပေါ့။ ဒီနိုင်ငံက ကျောင်းပြီးကိုး။ အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီကလည်း သူတို့ နိုင်ငံသားတွေက ပထမ။ နောက်မှ နိုင်ငံခြားသားတွေ။ အဲဒီနိုင်ငံခြားသားတွေထဲက သူတို့ နိုင်ငံက ကျောင်းဆင်းတွေဆို အခွင့်အရေးနည်းနည်း ပိုပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အလုပ်အတွေ့ အကြုံလည်းမရှိ၊ အလကားရတဲ့ကံလည်း မရှိတဲ့စန်းထွန်းတယောက် စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ဖန်လာပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ မဲဖေါက်ရင် ဘယ်တော့မှ မပေါက်၊ တခါမှလည်း တခုခုကို မကောက်ရစဖူး၊ သူများတွေ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးထိုးလို့ပေါက်ရင် တခါတလေများ ပေါက်ချင်မိလို့ထိုးမိပါတယ်။ အမြဲပေါက်တဲ့သူတွေ စန်းထွန်းလိုက်ထိုးတဲ့နေ့မပေါက်လို့ ဘူကောင်တဲ့လေ။ ဘယ်တော့မှ အလကားမရ၊ လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှ ရတဲ့ စန်းထွန်းပါ။ စင်္ကာပူကို ကျောင်းလာတက်ဖြစ်ရကလည်း ဒီလို။
"အမက ပညာလောဘ ကြီးတယ်နော်"လို့ဆိုလာတော့ ဒီပို့ စ်လေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထင်လည်းထင်ချင်စရာ စင်္ကာပူကိုလာတော့လည်း ကျောင်းတက်ဖို့ ။ အခု အမေရိကားကို လာတော့လည်း ကျောင်းတက်ဖို့ ။ မင်းချေ(မေမေ့မောင်)ကဆို "နင့်ကျောင်းက ခုထိ တက်လို့ မပြီးသေးဘူလား"တဲ့။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါ့။ လူ့ သက်တမ်းက ၆၀ ဆိုရင် သက်တမ်း တဝက်လောက်က ကျောင်းတက်နေရတာ။
မွေးကတည်းက မူကြိုကစလို့တက်လိုက်တဲ့ကျောင်း။ ခုထိ တက်ဆဲ။ နောင်လည်း တက်လတ္တံ့ ။ ကျောင်းပြီးရင် ကျူရှင်။ နယ်မှာကတော့ ကျူရှင်တခုယူထားရင် အဲဒီကျုရှင်ကပဲ ဘာသာစုံ သင်ပေးတာ။ မြို့က ခုခေတ်ကလေးတွေ သိပ်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာစာကျူရှင်၊ အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်၊ အတန်းပိုင်ဆရာမကျူရှင်(အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာ မထားရင် အမှတ်မကောင်းလို့ )၊ တကယ်တတ်အောင် နောင်ထက် ဂိုက်တယောက်ခေါ်သင်နဲ့ဆရာမတွေသာ ပြောင်းသွားတယ် ကလေးက ထိုင်ခုံက မထရ။ ဆော့မဲ့အချိန်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ အိမ်နားတွေမှာ ကလေးကစားကွင်းတွေ ရှိတော့ ညနေတိုင်း ကလေးတရုံးရုံး။ ရန်ကုန်မှာတော့ ကစားကွင်းမရှိ၊ ကားလမ်းပေါ်မှာလည်း ဆော့လို့ မရ။ အထပ်မြင့်နေတဲ့ကလေးတွေဆို ပိုဆိုးသေး။ မြေမနင်းလေးတွေ။
ဘဝအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ပေးတဲ့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးလို့တက္ကသိုလ်တက်တော့လည်း ကျူရှင်နဲ့မလွတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ တရုတ်စာသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဆေးဝါးသင်တန်း သင်တန်းပေါင်းများစွာ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပိတ်ရင် မကြီးကြောင့် ဦးသိန်းဝင်း TOFEL၊ UFL တရုတ်စာသင်တန်းတွေ တက်ရပါတယ်။ မကြီးတက်ခိုင်းလို့ သာ။ ကိုယ့်ဘာသာဆို ဘာသင်တန်းမှ တက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်။ အသုံးမတဲ့တဲ့ ပညာဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေ တက်ထားတော့ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေကို အခက်အခဲမရှိ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေနိုင်တာပါ။ တရုတ်လို မတောက်တခေါက် တတ်တော့လည်း တရုတ်တွေနဲ့အဖွဲ့ ကျ၊ ကိုယ်ရှေ့ တရုတ်တွေ အတင်းမတုတ်ရဲဘူးပေါ့ :D ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် အကတ်ကောင်းမှ ကုမ္ပဏီအလုပ်၊ အစိုးရအလုပ်ရတာ။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးတဲ့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်မရတော့ သင်တန်းတွေ တက်ရင်း အလုပ်ရအောင် စောင့်နေရင်း ကျောင်းတွေ၊ သင်တန်းတွေ တက်နေဆဲ။
အလုပ်အတွေ့ အကြုံကောင်းကောင်းရှိရင် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာကြပါတယ်။ အလုပ်လာရှာမယ်ဆိုရင်လည်း လေယာဉ်ခ၊ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်၊ တလအတွင်းအလုပ် ရရင် ရ။ မရရင်လည်း မလေးကိုသွားပြီး စတေးရှောင်။ ပြန်လာရင် တလလောက် ထပ်ရ။ ပိုက်ဆံတွေကုန်ပြီး စွန့် စားရတာပေါ့။ အင်ဒို၊ မလေး၊ တရုတ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အိန္ဒိယတွေနဲ့ အပြိုင် အလုပ်ရှာရတာ။ အရင်တုန်းက စီးပွားရေးကောင်းတော့ အလုပ်ပေါပေမဲ့ ခုက စီးပွားရေးကျပ်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ အလုပ်တခုရဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ စလုံးတွေကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေကြောင့် သူတို့ အလုပ်မရတာဆိုပြီး အမြင်က မကြည်လင်။ အမှန်က အလုပ်ကြမ်းအလုပ်တွေဆို သူတို့ စလုံးတွေ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ လုပ်ရတာ။ ဈေးချိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို အလုပ်ရှင်တွေက ကြိုက်ကြတယ်။ စလုံးဆိုရင် လစာများများ ပေးရပြီး အချိန်ပို မဆင်းနိုင်၊ ခွင့်ကလည်း အရမ်းယူ။ စလုံးတွေက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်တော့ အစိုးရကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေကို တင်းကျပ်လာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကကြိုက်လို့pass တင်ပေးရင်တောင် အစိုးရက reject လုပ်ချင်လုပ်တာ။ အေးဂျင့်နဲ့အလုပ်ရှာရင် ၃ထောင်နီးပါးလောက် ပေးရပါတယ်။ တနှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ရင်း အေးဂျင့်ကြွေးကို ဆပ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီမှာ တနှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ပြီးရင် နောင်အလုပ်ရှာဖို့လွယ်မယ်ဆိုပြီး သည်းခံပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။
တချို့ ကျတော့လည်း ကံကောင်းတာ အမဘွဲ့ ယူတာကို လာလည်တဲ့ညီမတယောက် အလုပ်ရသွားတယ်။ သူများတွေက သူ့ ကို အားကျနေတာ။ သူက သူ့ အမလို ကျောင်းတက်ချင်တာ။ ခုတော့ အလုပ်ရသွားလို့ဟွန့် တဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရှယ်တာတွေကို ဖတ်ရင်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိတဲ့ နုတ်စ်လေးတခုကို သတိရမိတယ်။
အသိအမတယောက် ဆံပင်ဆေးဆိုးလိုက်တော့ ရှိရင်းစွဲထက် ငယ်သွားပုံပေါက်တာ မြင်ရတော့ ဒီပို့ စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့လာကြိုတဲ့ လူအုပ်တွေကြားထဲမှာ အရပ်မြင့်တဲ့ အဖေ့ကို အရင်မြင်ရပါတယ်။ အဖေ့ကို မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏ မကြီးခမျာ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဆံပင်တွေ ဖြူနေပြီး အိုစာတဲ့ရုပ်ပေါက်နေလို့ လေ။ သူ့ သမီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာ သိတော့ နောက်နေ့ မှာပဲ အဖေ ဆံပင်အနက် သွားဆိုးတယ်။
အဲဒီကတည်းကစလို့နောက်နောင် မကြီး မြန်မာပြည်ကို လာမယ်ဆိုရင် အဖေ့မှာ အရင်ဆုံး မပျက်မကွက် လုပ်ရတာက ဆံပင်ဆေးဆိုးဖို့ ။
သည်းလည်းသည်းတဲ့ သားအဖ။ (ကိုယ်မသည်းရလို့:D )။
ဇူလှိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၁။
ComPro လို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ computer professionals မာစတာမှာ မိန်းကလေးဦးရေက နည်းနည်းလေး။ ကျောင်းသား ၄၀၊ ၅၀ ကျော်မှာ မိန်းကလေးက ၁၀ယောက်တောင် မပြည့်တာပါ။ ဒီလို ရှားပါးတဲ့ စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာ မိန်းကလေးတွေကို ဖိတ်ပြီး lady night party လုပ်ပေးပါတယ်။
ပါတီမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း၊ မိသားစုအကြောင်း၊ အလုပ်အတွေ့ အကြုံ၊ ဒီကျောင်းကို ဘယ်လိုသိတာ၊ ကျောင်းရောက်တော့ ဘယ်လိုခံစားရတာ၊ ဒီကျောင်းကို ကြိုက်တဲ့အချက်၊ မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကို ပြောပြီး မိတ်ဆက်ရပါတယ်။ အများစုက စီနီယာတွေဆီက သိတာ၊ သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ seminar လာပေးလို့ သိတာ၊ အီးမေးထဲကို ကျောင်းကြေညာရောက်လို့သိတာ၊ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူကတော့ သူ့ ပရော်ဖက်ဆာက ညွှန်းလို့ သိတာ။ စန်းထွန်း ရှာဖွေတွေ့ ရှိပုံလေးကို ပြောပြလိုက်ရင် အားလုံးက ပြုံးစိစိဖြစ်ကြတယ်။
စင်္ကာပူမှာတော့ တနှစ်တခါလောက် အလုပ်ပြောင်းကြပါတယ်။ လစာတိုးရင်တိုး၊ မတိုးရင် ကုမ္ပဏီအရမ်းကောင်းမှ မပြောင်းကြတာပါ။ ဒီဇင်ဘာ၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဖေဖေါ်ဝါရီဆို အပြောင်းအရွှေ့ များတဲ့လတွေပေါ့။ မကြီးကတော့ စံချိန်သစ် ၂နှစ်မှာ အလုပ်လေးခါပြောင်းတယ်။ စင်္ကာပူရောက်ရင် စင်္ကာပူလို ကျင့်တဲ့ စန်းထွန်းလည်း တနှစ်ပြည့်တော့ အလုပ်အသစ်ပြောင်းဖို့ကြံစည်ပါတယ်။ jobsdb၊ jobcentral၊ jobstreet တို့ မှာ တနေ့ နေ့တက်လာလိုက်တဲ့ အလုပ်တွေ။ တနေ့ တနေ့အလျင်မှီအောင် မနည်းလျှောက်နေရတယ်။ ဒါတောင် အသေးစိတ်ဖတ်တာမဟုတ်သေးဘူး။ ကိုယ်သိတာတွေ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို တွေ့ လို့ ကတော့ submit button ကို နှိပ်ပြီး အကုန်ပစ်တင်တာ။
ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာတဲ့ တလကျော်အတွင်း အင်တာဗျူး အခု ၂၀ လောက်ရတယ် (ကြုံတုန်း ကြွှားဦးမှ)။ တပတ်မှာ အင်တာဗျုး ၁ခု၊ ၂ခု အမြဲ ရှိတယ်။ အလုပ်လည်း ရရော အင်တာဗျူးပါးလည်းဝ လူကလည်း ငဖြီးကြီးကိုဖြစ်လို့:)။ SingTel၊ KPMG ၊ Hitachi၊ NUS Engineering School၊ Singapore Polythenic တို့ မှာ အင်တာဗျူးဖူးပါတယ်။ SingTel ဆို ၃ခါတောင် အင်တာဗျူးပြီး offer မပေးလို့အမြင်ကတ်လိုက်တာ။ ဒီလိုနဲ့mc ဆေးခွင့်ယူပြီး အင်တာဗျုးတွေ သွား၊ နေ့ လည် ထမင်းစားချိန်မှာ အသာလစ်ပြီး အင်တာဗျူးကို ပြေးနဲ့။ online ကနေ test ဖြေရတော့လည်း ဖြေလိုက်တာပဲ။ resume ပို့ ဆိုတော့လည်း ပို့ ပေါ့။ grading၊ trasncript ပို့ ဆိုတော့လည်း ပို့ တာပေါ့။ နောက်တော့ first test အောင်တယ်တဲ့။
ကိုယ်တက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကနေ grading၊ trasncript တွေ ပို့ ဆိုလို့NUS ကို ပြေး ဘွဲ့ လတ်မှတ် မိတ္တူကို သူတို့ ကို တံဆိပ်တုံးထုခိုင်း၊ စာအိတ်ကို ချိတ်ပိတ်ပြီးပို့ ။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က တံဆိပ်တုံးထုပေး၊ စာအိတ်ကို ချိတ်ပိတ်ပေးဖို့ပိုက်ဆံလေးသောင်း ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အင်္ဂလန်က NCC ကိုတော့ စကန်ဖတ်ပြီး ပို့ ဖို့ ပြော။ ကိုယ့်စပွန်ဆာက ရှေ့ နေတယောက်ရဲ့ရှေ့ မှာ လတ်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဖောင်ကို ပို့ ပေးပါလို့ဆိုလာပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ရှေ့ နေခက ဈေးကြီးပါဘိနဲ့ ။ မကြီးလတ်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဖောင်ကို ရန်ကုန်ပို့ ။ ရှေ့ နေက လတ်မှတ်ထိုးပေး။ ရှေ့ နေလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့ စွဲနဲ့မကြီးလတ်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့ စွဲ လွဲသွားလို့ပြန်လုပ်တာ ၁သောင်းထပ်ပေးရတယ်။
ရုံးက မန်နေဂျာကိုလည်း recommendation ပေးဖို့တိတ်တိတ်လေးပြောရ။ မန်နေဂျာ ဖိလစ်ပိုင်ကြီးက သဘောကောင်းလို့တော်သေးရဲ့။ အဲဒါတွေ ရတာ့မှ ည၁၂နာရီလောက်မှာ ဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးပြန်တယ်။ စင်္ကာပူမှာ ညဆို အမေရိကားမှာ နေ့ လည်ကိုး။ မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ဖြေလိုက်တာ နောက်နေ့ မှာတော့ final offer ရပါတယ်။
အဲဒီတော့မှ သိတယ် အမေရိကားကို လွှတ်မဲ့အလုပ်မှတ်ပြီး လျှောက်လိုက်တာ ကျောင်းဖြစ်နေလို့:D ။
ဇူလှိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၁။
kwi kwi ရဲ့ မှတ်ချက်လေးကို ဖတ်ရတော့ ဒီပို့ စ်လေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုညီလင်းသစ် ပြောသလို ခရီးရောက်နေတာ :D ။ "ကျနော်က တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်၊ စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ယောက်ယောက်က ကွန်မန့်မှာ ပြန်မေးလိုက်၊ ဒါကို ကျနော်က ပို့စ်အသစ်တစ်ပုဒ်ရေးပြီး ပြန်ရှင်းလိုက်နဲ့ အတော်လေး ခရီးရောက်နိုင်တယ်၊း)"။
စန်းထွန်း ကိုယ်တိုင်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မယ်၊ စာအုပ်ဖတ်တော့မယ် ဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့သူငယ်ချင်းတွေ ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ စာအုပ်တွေမှ ဖတ်တာပါ။ အချိန်ရှားပါးလှတဲ့ ယနေ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပေးလိုက်သလောက် အချိန်ကုန်ခံရကျိုးမနပ်ရင်၊ ထိုက်တန်တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ရသ တခုခုမှ မရရင် ငါရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်သွားပြီဆိုပြီး အတော်စိတ်တိုမိပါတယ်။
kwi kwiရဲ့ကွန်မန့် လေးကို မြင်ရတော့ လှည်းတန်းက အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ ဆရာဦးဝင်းနိုင် ပြောတာ သွားသတိရတယ်။
"ဦးဝင်းနိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း အရမ်းကောင်းတာ"။
"ဟေ ဟုတ်လား ဘယ်လို ကောင်းတာတုန်း"။
ဆရာဦးဝင်းနိုင်ခမျာ ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်။
"အမစာတွေ ဖတ်ရတာ ရယ်ရတယ်"လို့ဆိုလာတော့ စန်းထွန်းမှာလည်း ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက် :) ။ ဗဟုသုတ၊ ရသ မပေးနိုင်ရင်တောင်မှ မအားတဲ့ကြားထဲက အချိန်ပေးပြီး စာလာဖတ်သူတွေကို ရယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဝမ်းသာလှပါပြီ။
ဇူလှိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၁။
ရေခြား မြေခြား တိုင်းတပါးမှာ နေကြသူတွေ အများစု(အိမ်ထောင်မရှိ၊ ရည်းစားမရှိသူတွေ)က ညည်းကြတာက ပျင်းတယ်တဲ့ (ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်)။ အဲလိုညည်းတိုင်း သူငယ်ချင်းဝေကလည်း အကြံပေးပါတယ်။ ရည်းစားထား၊ ယောက်ျားယူ၊ ကလေးမွေး နင် ပျင်းချိန်တောင် ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကတော့ ပျင်းတယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ တောင် မေးယူရမယ်။ မီးလာရင် လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေ (ရေတင်၊ မီးပူတိုက်၊ မြဝတီ၊ မြန်မာ့အသံက လွှင့်တဲ့ ကိုရီးယားကားကို စောင့်ကြည့်။)၊ မီးမလာရင် လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေ (အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အတင်းတွေ၊ သတင်းတွေ ဖလှယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော်ကီပွား။)။ သင်တန်းသွား၊ အိမ်ကခိုင်းတာတွေလုပ်၊ မအားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သွားလည်နဲ့အားကို မအားတာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေက နင် အလုပ်သာ မလုပ်တယ်။ အိမ်မှာကို မရှိဘူးတဲ့။ ဘာမှ ချပြစရာ မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်တဲ့သူထက်ကို အလုပ်များတာပါ။
အင်တာနက်ဆိုတာလည်း မကြီး စင်္ကာပူရောက်မှ စသုံးဖြစ်တာပါ။ ရုံးမှာ အင်တာနက်သုံးရတဲ့သူငယ်ချင်း အိကေကို မကြီးက ဘယ်အချိန် အွန်လိုင်းလာခဲ့ပါလို့ပြောရင် အိကေက အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြော။ အဲဒီတော့မှ အွန်လိုင်းတက်တာ။ မြန်မာပြည်မှာ အွန်လိုင်းတက်ဖို့ တောင် မအားတာပါ။
နိုင်ငံခြားမှာတော့ သူငယ်ချင်းအုပ်တောင့်ရင် ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်း အုပ်မတောင့်ရင်တော့ အတော်ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်အားရင် သူမအား၊ သူအားရင် ကိုယ်မအား၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူမကြိုက်၊ သူကြိုက်တာ ကိုယ်မကြိုက်နဲ့ ။ နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ သူတော်တော်များများ အထီးကျန်တာနဲ့ရည်းစားတွေ ရလေကြသတည်း။
မရတဲ့သူတွေကလည်း အဲဗား အွန်လိုင်း၊ ကွန်ပျူတာဘေးအိပ်၊ ကွန်ပျူတာဘေးစား ဘဝရောက်ရော။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက မချက်မပြုတ်တတ်ကြပေမဲ့ ဒီလည်းရောက်ရော ချက်ပြုတ်တတ်ရော။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက မုန့် ဟင်းခါးကို တခါမှ မချက်ဖူး၊ ကောက်ညှင်းလည်း တခါမှ မပေါင်းဖူးတာပါ။ ချက်စရာမလိုတာ ဝယ်စားရုံပဲလေ။ ဒီရောက်တော့ ရယ်ဒီမိတ်ထုပ် တန်ခိုးတွေနဲ့မုန့် ဟင်းခါး၊ မုန့် တီတွေ ချက်၊ ကောက်ညှင်းတွေ ဘာတွေ ပေါင်းနဲ့ ။ မကြီးလက်သုံးစကားအရ "နိုင်ငံခြားရောက်မှ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်နေတာ။"
အွန်လိုင်းက ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ရ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ လိုက်ရ၊ မန့် ရ၊ အကောင်မွေး၊ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်၊ စိုက်ပျိုးလို့မပြီးနိုင် လယ်သမားလုံးလုံး ဖြစ်နဲ့ ။ အင်တာနက်တန်ခိုးကြောင့် ဘလော့ဂါတွေရဲ့ပို့ စ်တွေ၊ ဂီတဝါသနာပါသူတွေ၊ ဓာတ်ပုံဝါသနာပါသူတွေ ဖန်တီးထားတာကို မြင်တွေ့ ခံစားရတာပါ။ အင်တာနက်မှ မသုံးရရင် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ယောင်ချာချာ။ ဒီလောက် အွန်လိုင်းတက်နေရလည်း ပျင်းတယ်လို့အော်နေဆဲပါပဲ။
စင်္ကာပူရောက်တော့ စာမေးပွဲ အောင်အောင်၊ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာတော့လည်း အလုပ်ရအောင်၊ အလုပ်တော့လည်း အလုပ်ထဲ အဆင်ပြေအောင် လုံးပန်းနေရတာ။ ရုံးချိန်ကလွဲရင် မကြီးနဲ့အမြဲတတွဲတွဲ။ တလတခါလောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား၊ နှစ်ပတ် တခါလောက် တောင်တက်။ လျှော့ပင်းထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျော့ကင်းပြေးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွားလည်ဖြစ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တပတ်စာ အစားအသောက်တွေ ဝယ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကြီး ဟင်းချက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးကနေ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတော့ ပျင်းတယ်ဆိုတာ မရှိရအောင်ပါပဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ ပျင်းတယ်လို့ခံစားမိလာလဲဆိုတော့ အလုပ်ထဲက အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်လာတဲ့အချိန်။ နိုင်းနိုင်းစနေ၊ မမ ဘလော့တွေ ဖတ်ပြီး ဘလော့ရေးချင်တဲ့ ပိုးတွေ ထလာတော့ ဘလော့လေးတခု ဖန်တီးမိပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ရေးဖြစ်တာက မကာအို သွားတဲ့ အတွေ့ အကြုံ။ စာကနည်းနည်း ဓာတ်ပုံက များများ။ မြန်မာဖောင့် မရိုက်တတ်တော့ burglish သုံးပြီ ရိုက်ရတာ။ နေကောင်းလားဆိုရင် nay ရိုက်လိုက် ကျလာတဲ့ အထဲက နေကို ရွေး။ ဒါကြောင့် burglish သုံးပြီး ရေးထားတဲ့ပို့ စ်တွေဆိုရင် စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံတွေက မှားမှမှား။ တချို့ စာလုံးတွေဆို burglish မှာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာ လို့ ရိုက်ချင်ရင် planet myanmar dictionary မှာ world လို့ ရိုက် ပေါ်လာတဲ့ ဟာကို ကော်ပီကူးပြီး ဘလော့ထဲ ထည့်ရတာ။
ဒီရောက်တော့ တဦးတည်းသော မြန်မာဆိုတော့ စကားပြောဖော်မရှိ။ အတော့်ကို ပျင်းတာပါ။ မနက်တိုင်း မကြီးနဲ့ပြောရင် ဒီနေ့ တော့ အီးအီး ဘယ်နှစ်ခါ ပါတယ်က အစ ပြောတာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စန်းထွန်း စကားများလွန်းလို့ဘိုးဘိုးက စကားမပြောဘဲ ငြိမ်ငြိမ်နေရင် ပိုက်ဆံပေးမယ်တဲ့။ အိမ်မှာ ဖေက တပြားမှမရှိတဲ့ ဘဝကနေ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့တာ၊ သားသမီးတွေကို ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ တာကို ပြောပြရင် မကြီးက ထောက်ပေး၊ ဖေက ပြောနဲ့အတိုင်အဖောက် အတော်ညီတာ။ စန်းထွန်းကတော့ သိပြီးသားတွေဆိုပြီး ပတ်ပြေးရော။ မေတို့ရောက်လာရင်တော့ ပြောတာ တရွာလုံးအကြောင်းကုန်။ ဖေက ဒီညီအမသုံးယောက် ဘာတွေများ ဒီလောက်တောင် ပြောနေကြပါလိမ့်တဲ့။
မခိုင်ကတောင် နင် အရင်က ဒီလောက် စကားမများပါဘူးတဲ့။ မြန်မာစကားငတ်နေတာလေ။ ကြုံလို့ ကတော့ စက်သေနတ်ပစ်သလို မရပ်မနား nonstop ပြောတော့တာ။ ပျင်းတိုင်း၊ အားတိုင်း၊ လွမ်းတိုင်း ဘလော့မှာ ရေးဖြစ်တယ်။ ဒီရောက်မှ ရေးလိုက်တဲ့စာတွေ။ စင်္ကာပူမှာတုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိမ့်လိုက်၊ မကြီးနဲ့လိမ့်လိုက်နဲ့ဘလော့ရေးဖို့အချိန်မရှိတာပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က နင်က အပြင်မှာ စကားများရုံမက ဘလော့မှာလဲ စကားများသားတဲ့ :D ။
မြန်မာစာဖောင့် ရိုက်တတ်တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ဇွန်လကမှ ရိုက်တတ်တာ။ ရိုက်တတ်သွားပုံကလည်း ဒီလို။ volunteer လုပ်ပေးတော့ မုန့် ဖိုးရအောင် ဘာသာပြန်လုပ်မလားတဲ့။ ပိုက်ဆံရချင်ဇောနဲ့မြန်မာစာလက်ကွက် ကျင့်လိုက်တာ နှစ်ရက်ပဲ ကြာတယ်။ ဘလော့က ကိုယ့်ရဲ့လက်ကွက်ကျင့်ရာ နေရာကြီးပေါ့ :) ။ ဘာသာပြန်မလုပ်လိုက်ရပေမဲ့အမြတ်ကတော့ မြန်မာစာဖောင့်ရိုက်တတ်သွားတာပါပဲ။ canon ကင်မရာလေး ဝယ်တော့ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် လက်ကလိပြီး မျက်စိနောက်အောင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်။ ခုလည်း မြန်မာစာဖောင့်ရိုက်တတ်သွားတော့ အမြင်ကတ်လောက်အောင် ပို့ စ်တွေ ရေးပြီး ဘလော့ပေါ်တင်။ ရုတ်ရုတ် လာမလုပ်နဲ့ နော် အမြင်ကတ်ရင် ဘလော့မှာ ရေးပစ်လိုက်မယ်လို့သူငယ်ချင်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်တတ်သေးတာ :P ။
ပျင်းတယ်လို့အော်နေသူများအတွက် အမြဲပေးတတ်တဲ့ အကြံညဏ်ကတော့ (လူတိုင်း သိပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆရာကြီး လုပ်လိုက်ဦးမှ။) အဝတ်ဗီရိုရှင်း၊ အခန်းသန့် ရှင်းရေးလုပ်၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း သန့် ရှင်းရေးလုပ်၊ တချို့ အင်္ကိင်္ျတွေကို လက်နဲ့ လျှော်၊ မီးပူတိုက်။ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အခန်း သန့် ရှင်းသွားရင်၊ မီးပူတိုက်လို့အနံ့ မွှေးမွှေးရတာ စိတ်ကြည်နှုးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ သီချင်းနားထောင်၊ ဝထ္ထုဖတ်။ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ပြီး ချက်ပြုတ်။ လျှော့ပင်းထွက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွား။ အားကစားလုပ်၊ သစ်ပင်စိုက်။ ဝါသနာပါရာ (ဘလော့ရေး၊ ဂီတာတီး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်) လုပ်ပါ။ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပါ။ သူတပါးကို ကူညီခြင်းက စိတ်ချမ်းမြေ့ မှု ရပါတယ်။ တခုခုကို (ဂီတ၊ ဘာသာစကား၊ အတတ်ပညာ)သင်ယူလေ့လာပါ။ သင်ယူလေ့လာနေခြင်းက အယ်ဇိုင်းမား ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှုစားပါ။ (ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သစ်ပင်တွေ၊ ပန်းပွင့်တွေရဲ့သာယာလှပမှုကို ခံစားပါ)။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစုနဲ့တပတ်တခါ ဖုန်းပြောပါ။ မိဘတွေက တပတ်တခါ ဆက်လာမဲ့သားသမီးဆီက ဖုန်းကို မျှော်နေကြတာပါ။ အဆင်ပြေရင် ခရီးထွက်ပါ။ အမြင်တွေ ပြောင်းပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အားအင်တွေ ရမှာပါ။ လှလှပပ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေပါ။ လှတပတလေး ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူကို မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပါ။ (ပြောသာပြောရတယ် ကိုယ်ကိုတိုင်က စုတ်တီးစုတ်ပြတ်ရယ် :D )။ ဓာတ်ပုံတွေ များများရိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေကသာ ကိုယ့်ဘဝမှတ်တမ်းအနေနဲ့ကျန်ရစ်တာပါ။ ပြုံးပါ။ အားရပါးရ ရယ်မောပါ။ မိတ်ဆွေတိုးအောင် လုပ်ပါ။ မိတ်ဆွေများရင် ကောက်တဲ့ လမ်းတောင် ဖြောင့်သွားပါတယ်။ သူများက စတင်ပြီး မိတ်ဖွဲ့ လာအောင် စောင့်မနေပါနဲ့ ။ ကိုယ်တိုင် ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး စကားစတင်ပြောပြီး မိတ်ဖွဲ့ လိုက်ပါ။ ဘယ်သူမှ ပြန်မနှုတ်ဆက်ဘဲ မနေပါဘူး။ သူများ ပြောတာ နားထောင်ပြီး မေးခွန်းကောင်းတွေ မေးပါ။ အတွေ့ အကြုံသစ်တွေ ၊ ဗဟုသုတတွေ ရမှာ အသေအချာပါ။ ကိုယ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေဆီက သိနိုင်ပါတယ်။
ပြသနာတခုခု ကြုံရင် မိဘ၊ မိတ်ဆွေတွေဆီက အကြံညဏ်တောင်းပါ။ ခေါင်းတခေါင်းပဲ စဉ်းစားတာထက် ခေါင်းအများကြီးဆီက အကြံညဏ်ကောင်းတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက် ထားပါ။ အချိန်ကြာချင် ကြာနိုင်ပေမဲ့တနေ့ ဖြစ်မလာဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ။ ဘာသာရေးကို ငါးမိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ဆုတောင်းပါ။ တနေ့ငါးမိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တရားထိုင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဘုရားစင်ရှေ့ မှာ ထိုင်မှ တရားထိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်ငြိမ်လေး ငါးမိနစ်လောက် နှာသီးဝကို မှတ်နေရင်ပဲ အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလှတဲ့လောကမှာ ငါးမိနစ်လောက် ဘာမှ မတွေးဘဲ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပျင်းဖို့ တောင် အချိန်မရှိတော့ဘူး လုပ်စရာတွေ များမှများနော်။
ဇူလှိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၁။
"ကိုဟန်သစ်ငြိမ်ရေးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းလေးပါ။ ကျနော်နဲ့ Lit elephant တို့ဆိုထားတာပါ။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် စုံတွဲသီချင်းလေးဆိုချင်လို့​ ကျနော် ရေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ ဘယ်တုန်းကမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ​ဘူး။ အစ်ကို ဟန်သစ်ငြိမ်ရေးပေးမှပဲ ဆိုခွင့်ရတာပါ။ သီချင်းလေးအတွက် ကိုဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ နားဆင်ပေးမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ :)"
ကိုရန်နိုင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် "နားလည်ပေးလှည့်" သီချင်းလေးကို ကြိုက်လို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ နားဆင်ရအောင် ဘလော့ကနေ ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာတော့ Yan Naing Aung လို့အပ်ထားရင် သူ့ သီချင်းတွေကို ဖေ့ဘွတ်ကနေ နားဆင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
youtube လင့် ပါ။
အစားကောင်းကောင်းစားရရင် ချစ်သောသူကို သတိရတယ်လို့ဆိုကြသလို စာကောင်းကောင်းလေးများ ဖတ်ရရင်၊ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးများ နားထောင်ရရင်လည်း ချစ်သူငယ်ချင်းများကို နားထောင်စေချင်ပါတယ်။
ဇူလှိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၁။
ပထမဆုံး အရှုံးဆိုတာကို စတင်ခံစားဖူးတဲ့နေ့ ကတော့ ကိုယ်အတွက် ကမ္ဘာပျက်သလိုပါပဲ။ အရာရာ အကျီးတန် ရုပ်ဆိုးနေပြီး ဘယ်သူနဲ့ မှလည်း မတွေ့ ချင်၊ ဘာမှလည်း မစားချင်၊ ကံက ကိုယ့်တယောက်ပဲ ကွက်ပြီး ဆိုးနေသလို အလိုလို အားငယ်ပြီး မျက်ရည်တွေက အလိုလို ကျလာတာပါ။ တယောက်ယောက်က အားပေးလိုက်ရင်ပဲ မျက်ရည်ပင်လယ်ဝေတော့တာပဲ။ အားလုံးနဲ့အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားချင်တာပါ။
ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ နားနေရတော့လည်း ဘဝဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေသလိုပါပဲ။ ထချင်တဲ့အချိန်မှ အိပ်ယာထ၊ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ပြီး ရှာဖွေစားသောက်လိုက်၊ ဘလော့လေး ရေးလိုက်၊ ဘလော့တွေ ဖတ်လိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်၊ စာတွေ လေ့လာလိုက်၊ မကြီးနဲ့စကားပြောလိုက်နဲ့ဘဝက သာယာနေတာ။ ကားမမောင်းတတ်၊ ကားမရှိရင် ခြေကျိုးသလို ဘယ်မှ လိမ့်လို့မရတဲ့အမေရိကားမှာ တနေ့ တနေ့အခန်းထဲ ဂူအောင်းနေရတော့ ညနေစောင်းဆိုရင် ခေါင်းကိုက်နေပြီ။ လမ်းလေးတပတ်လောက် လျှောက်လိုက်၊ ကလေးကစားကွင်းမှာ မကြီးမငယ်နဲ့ကလေးတွေ ဒန်းကို အပိုင်စီးရင်း အားယားနေတော့လည်း မအားယားနိုင်တဲ့ ဘဝကို လွမ်းနေပြန်ရော။
ဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ ရတော့မှ သူတို့ ရဲ့အခက်အခဲတွေ သိလာရော။ ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးနေချိန်မှာ အလုပ်တခုရဖို့ရုန်းကန်နေရတာတွေ၊ ကိုယ်တောင် တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စင်္ကာပူမှာ နေခဲ့တာတောင် ဒီရောက်တော့ ဒီရဲ့ဓလေ့စရိုက်တွေ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ၊ ဥပဒေနဲ့အညီ နေတတ်အောင် နေဖို့ကြိုးစားနေရဆဲ။ သူတို့ အတွက်တော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး။ သူတို့ နဲ့ယှဉ်ရင် ကိုယ့်အခက်အခဲက စာမဖွဲ့ လောက်စရာ။
အနားယူပြီးတော့ ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ မူတည်ပြီး ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချက်ရတာ့တယ်။ သွေးပူနေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ရင် မှားသွားမှာလေ။ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ သိပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို မဆိုင်းမတွ လုပ်။ နောက်တလှမ်း နောက်ဆုတ်တာဟာ ရှေ့ ကို နှစ်လှမ်း လှမ်းဖို့အားယူတာပါ။ တကြိမ် မအောင်မြင်ရင် နောက်တကြိမ် ကြိုးစားပါ။ မအောင်မြင်သေးရင် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပါ။ မကြိုးစားဘူးဆိုမှသာ တကယ် ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။ လဲကျရင် ပြန်ထဖို့ကြိုးစားပါ။ ပြန်မထဘူးဆိုရင် ဆိုရင်တော့ သူများနင်းတာ ခံရမှာပဲ။ ပြန်ထဖို့ကြိုးစားရင်တော့ လက်ကမ်းကြိုဆိုကြမှာပါ။
ကြက်နာကျပြီဆို ကြက်တွေ တော်တော် သေပါတယ်။ မသေဘဲ ကျန်နေတဲ့ ကြက်တွေကတော့ အတော်ခံနိုင်ရည်ကောင်းပြီး နောင်ကြက်နာကျပြီဆို မသေတော့ဘူး။ အခက်အခဲတွေက ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းကို တိုးတက်စေတာပါ။ အခက်အခဲတွေကြောင့်သာ စိတ်ဓာတ်တွေ ကြံ့ ခိုင်လာပြီး ရင့်ကျက်လာတာပါ။
အရင်က ရုပ်ဆိုးအကျီးတန်နေတာတွေက ခုတော့လည်း သာယာလှပနေလို့ ။ နွေရာသီရဲ့နေရောင်ခြည်အောက်မှာ သစ်ပင်တွေကလည်း စိမ်းလန်းနေလို့ ၊ ပန်းတွေကလည်း ဖူးပွင့်နေလို့ ၊ ငှက်ကလေးတွေရဲ့အသံကလည်း ငြိမ့်ညောင်းသာယာနေလို့ ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အပြုံးကလည်း ခင်မင်စရာကောင်းနေလို့ ၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေ တိုးနေလို့ ။ ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်းမှာ တနေ့ တနေ့မရိုးနိုင်တဲ့အသိပညာတွေ ရနေပါတယ်။ အမှန်က အရာအားလုံးက အရင်ကလည်း ဒီအတိုင်း အခုလည်း ဒီအတိုင်း။ ကြည့်တဲ့ အမြင်ကသာ ကွာတာပါ။ အစိမ်းရောင် မျက်မှန်တပ်ပြီး ကြည့်ရင် အစိမ်းပဲ မြင်ရသလို အပြာရောင် မျက်မှန်တပ်ကြည့်ရင် အပြာရောင်ပဲ မြင်ရတာပါ။ အစက မချစ်တဲ့ မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ အရာအားလုံးက မချစ်မနှစ်သက်စရာ ကောင်းတာပါ။ ခုတော့ ချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့အရာအားလုံးက ချစ်စရာကောင်းလို့ ။
ကျောင်းသားအယောက် ၅၀ကျော်မှာ ရှားရှားပါးပါး ပါတာက ကျောင်းသူ ၅ယောက်။ Eritreaနိုင်ငံက အာရိယန်ကလွဲရင် တို့ လေးယောက်က တတွဲတွဲ။ မိုင် နိမ်း အစ်စ် မိုင်းလို့နှုတ်ဆက်တာနဲ့သူ့ နာမည်ကို တခါတည်း မှတ်မိစေတဲ့ Mai Pham လို့ခေါ်တဲ့ဗီယက်နမ်မလေး၊ Sunam နဲ့Rama နီပေါမလေးတွေနဲ့တို့ ။ အုပ်စုထဲမှာ မွေးနေ့အရင်ကြုံတာက maiရဲ့မွေးနေ့ ။ ဘာလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲလို့ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြတာပေါ့။
အစားသောင်းကျန်းတဲ့ maiကို အစားဝယ်ပေးရအောင်လည်း သူစားတာ ကိုယ်မစားနိုင်သလို ကိုယ်စားတာလည်း သူမစားနိုင်။ ရေလုံပြုတ် ဗီယက်နမ်စာတွေကို မစားနိုင်သလို ဟင်းတိုင်း မဆလာနဲ့အာလူးပါတဲ့နီပေါစာကို မစားနိုင်။ အင်္ကိင်္ျဝယ်ပေးရအောင်လည်း ကိုယ့်အတွက်တောင် ဆိုဒ်မရှိတာ မော်ဒယ်လို ပိန်တဲ့ mai အတွက်တော့ အတော့်ကို ရှာဖွေနိုင်မှ။ ကိုယ်ရွေးပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလည်း သူကြိုက်ဦးမှ။ တို့ ဒီကို လာခါနီး ပြုံးမြတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ခွေးရုပ်လေးကို ပြလိုက်တော့ အားလုံးက တညီတညွှတ်တည်း အရုပ်လက်ဆောင် ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
wall mart ကို သွားတဲ့နေ့သုံးကောင်သား အရုပ်ရှာပုံတော် ဖွင့်ကြတာပေါ့။ အရုပ်ကြီးကြီး ပေးချင်ပေမဲ့ သယ်ရလွယ်တဲ့အရုပ်သေးကိုပဲ ရွေးလိုက်ကြတယ်။ ပန်းရောင်ကြိုက်တဲ့mai အတွက် ပန်းရောင်လိုချင်ပေမဲ့ခဲရောင်ပဲ ရှိတယ်။ mai ကလည်း ကြိုက်တယ်တဲ့။ ဈေးကလည်း ကြီးလိုက်တာ ၅ ကျပ်တောင်။ ၃ယောက်နဲ့စားတော့ တယောက် ၁ကျပ်ကျော်ကြီးများတောင် ကျတယ် :P။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်တယ်။ ကြားရတဲ့ သူတိုင်းကလည်း မပြုံးဘဲ ဝါးလုံးကွဲ ရယ်ကြတယ်။ တန်ဖိုးနည်းပေမဲ့ အမှတ်တရတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်တွေနဲ့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရတဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးမွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် တို့ တသက်မှာတော့ အမှတ်တရ ဖြစ်နေမှာပါ။
တန်ဖိုးအကြီးဆုံး မွေးနေ့ လက်ဆောင်။
ဇူလှိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၁။
ခလုတ်ထိမှ အမိ တရုံသာမက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အားလုံးကိုပါ တတာပါ။ internship ဆင်းတုန်းက allowance ကို intern ဆင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီက မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့အေးပို၊ အီးတီ၊ စန်းထွန်း သုံးကောင်သား toa payoah ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြေးကြတော့တာပဲ။ နောက်တော့လည်း allowance ကို ကျောင်းက ပေးလို့အဆင်ပြေသွားတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ယောင်လို့ တောင် ခြေဦးမလှည့်ကြတော့ပါ။
ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာတော့လည်း ဝင်လိုက်တဲ့ ဓိဌာန်၊ စိတ်လိုက်တဲ့ပုတီး၊ ရွတ်လိုက်တဲ့ ပဋ္ဌာန်း ။ ဘုရား၊ တရား မြဲနေတာ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ နတ်တွေပါ အကောင်းမနေရ။ ကုမ္ပဏီကြီးကြီး၊ လစာကောင်းကောင်း ရပါလို၏လို့ဆုတောင်းနေတာ။ bugis က ကွမ်ရင်မယ်တော်၊ tanjong pagar နား Hock Teck See Temple က စင်္ကာပူ ကျွှန်းစောင့်နတ်ဆိုတာပါ အကောင်းမနေရ။ တို့ တွေ နားပူနားဆာတိုက်နေတာ။ ဟော အလုပ်ရသွားပြန်တော့လည်း မေ့သွားကြပြန်ရော။
အဲ အလုပ်၊အိမ် တခုခု အဆင်မပြေရော ဘုရား၊ တရားကို သတိရပြန်ရော။ အဆင်ပြေပြန်တော့လည်း မေ့သွားပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ဂျာအေးသူ့ မေရိုက်ရော။ ဆရာတော်ကို လာဖူးကြတဲ့ နွားလှည်းတွေက ကျကျန်တဲ့ နွားချီးတွေကို ကြုံးနေရတဲ့ ကပ္ပိယ ညည်းညူသံကို ကြားတော့ ဆရာတော်ကြီး "ပေးပေး ဒကာ မကြုံးချင်ရင် နေပါ။ ဦးပဉ္ဖင်း ကြုံးလိုက်ပါ့မယ်။ ဝေယျာဝဇ္ဇကုသိုလ် လုပ်ခွင့်ကြုံပြီ။" လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်သတဲ့။ ဒါကြောင့် ရေချိုးခန်းမှာ ဆံပင်တွေ တွေ့ တဲ့ အခါ၊ မီးဖိုချောင်မှာ အမှိုက်တွေ တွေ့ တဲ့ အခါ (သူများဟာတွေဆိုတော့ ရွံမှာပေါ့) ဝမ်းသာလိုက်ပါ။ ငါတော့ ဝေယျာဝဇ္ဇ ကုသိုလ်လုပ်ခွင့် ကြုံပြီလို့ ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောတယ်။ အခက်အခဲဆိုတာရှိမှ ဘုရားကို မမေ့မှာတဲ့။ အခက်အခဲကြုံရင်တော့ တွေးလိုက်ပါ။ ငါတော့ ဘုရား၊ တရား လုပ်ခွင့်ကြုံပြီလို့ ။
မြန်မာပြည်မှတော့ ကုသိုလ်ကံက မသိသာပါဘူး။ အရင်ကလည်း ဒီအတိုင်း နောင်နှစ်တွေ ကြာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ စင်္ကာပူမှာတော့ ကံက အရမ်းသိသာပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် တော်ပေမဲ့ ကိုယ့်လောက် အလုပ်ကံ မဆင်မပြေတာတို့ ။ ကိုယ့်လောက် မတော်ပေမဲ့ကိုယ့်ထက် လစာကောင်း၊ ကုမ္ပဏီကောင်းမှာ ရတာတွေ ကြုံရတော့ ကံဆိုတာကို တကယ်ယုံလာပါတယ်။ လစာနည်းတဲ့သူက လစာများတဲ့သူကို အားကျ။ ပင်ပန်းလည်း ပိုက်ဆံအများကြီးရတော့ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တယ်ပေါ့။ လစာများတဲ့သူကလည်း ဒီလောက် ပင်ပန်းတာ ဘဝကြီးက ဘာအဓိပ္ပာယ် ရှိတော့မှာပဲ။ လစာနည်းနည်းရပြီး အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေလိုက်ချင်တော့တယ်လို့ငြီးကြတယ်။
ကိုယ့်အထက် မန်နေဂျာက ကိုယ့်ကို ထုထောင်းရင် တွေးလိုက်ပါ။ အရင်ဘဝက ငါ သူ့ ကို ထုထောင်းထားလို့နေမှာလို့ ။ လစာနည်းနေရင်လည်း ဟိုဘဝက လှုဒန်းထားသလောက် ကိုယ်ရတာလို့တွေးလိုက်ပါ။ ဥာဏ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်း အခု လေ့လာဆည်းပူးနေလို့နောင်ဒီထက် ဥာဏ်ကောင်းတော့မှာလို့တွေးလိုက်ပါ။ အိမ်ရှင်မတွေကလည်း တနေ့ တနေ့ အိမ်အလုပ်တွေပဲ လုပ်နေရလို့စိတ်ညစ်မနေရပါနဲ့ ။ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့မိန်းမတွေက အိမ်ရှင်မဘဝကို အားကျနေတာ။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အလုပ်တွေကို လုပ်ရင်း ကုသိုလ်ရနေတာက မင်း၊ အိမ်ရှင်မ၊ ဘုန်းကြီးတဲ့။ အရင်ဘဝက ကံတွေကို ပြင်လို့မရပေမဲ့ပြင်လို့ ရနိုင်တာက အခုလက်ရှိ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့တန်ဖိုးရှိအောင် အသုံးချရမှာလဲပါ။
ဟုတ်ကဲ့စန်းထွန်းကတော့ ခလုတ်ထိရင် အားလုံးကို တတတ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သရဲတဘက်တွေအကြောင်း၊စုန်းတွေအကြောင်းကို ပုံပြင်အဖြစ် ကြားဖူးပါတယ်။ တချို့ သူငယ်ချင်းဆိုရင် သရဲပုံပြင် အပြောကောင်းတာ ကိုယ့်မှာ ညမှောင်ရင် အိမ်သာကို တယောက်ထဲ မသွားရဲတော့တဲ့အဖြစ်။
စင်္ကာပူမှာတော့ သရဲလဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီလဆို သရဲတွေ ထွက်ကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ သရဲလိုက်ရှာတဲ့ အဖွဲ့ လည်း ရှိတယ်။ ခရမ်းရောင်(North East Line) ရထားလိုင်းမှာဆို Potong Pasir (NE 10)နဲ့ Serangoon (NE 12) ကြားမှာ ဘူတာ NE 11 က ပျောက်နေတယ်။ အရင်က ရှိတယ်။ သင်္ချိုင်းကုန်းကို ဖျက်ပြီး ဆောက်ထားတာ။ နောက်တော့ ရထားလာရင် ဖြတ်ပြေးတာတို့ဘာတို့ တွေ့ လို့ဖျက်လိုက်တာလို့ကြားတယ်။ စင်္ကာပူကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့ သရဲအကြောင်း ကြားရပြန်တယ်။ ပြည့်ပြည့်ဆို နေ့ ခင်းဖက် သူအိပ်နေတုန်း တရုတ်လိုလို လူတယောက်ကို မြင်လို့ တဲ့။ မိန်းကလေးနေတဲ့အိမ်မှာ ဘယ်ကယောက်ျားလေးက ရောက်လာပါလိမ့်ပေါ့။ အီးတီကတော့ သူ့ အိမ်မှာ သရဲမြင်လို့လန့် ပြီး ဖျားပါရောလား။ တရုတ်တယောက်ကတော့ မနက် ၁နာရီ၊ ၂ နာရီလောက် ကျောင်းကနေ သူ့ အိမ်ကို ပြန်ရင် အင်္ကျီဖြူဝတ်ထားတဲ့ မိန်းမတယောက် သူ့ နောက်ကို လိုက်လို့ တဲ့။ သရဲမှန်း မသိဘူး။ ခုခေတ် တရုတ်တွေက ဘာသာမဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ။ ကျောင်းမှာလည်း ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ သရဲရှိတယ်လို့ကြားတယ်။
project မပြီးလို့ကျောင်းမှာ ညအိပ်ရတဲ့ ညတွေဆို ည၁၂နာရီကျော်ရင် အိမ်သာကို တယောက်တည်း မသွားရဲဘူး။ အဖော်တယောက်ပါမှ သွားရဲတယ်(ဗန္ဓုလသွေးပါတယ် :D)။ တခါက ဖျပ်ခနဲ မီးမှောင်သွားလို့အိပ်ချင်နေတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိဘူး ပြေးလိုက်တာ တန်းနေတာပဲ။ မိန်းခလုတ်ကျတာလား၊ တယောက်ယောက် စတာလား မသိတော့ပါဘူး။
discussion room ထဲမှာ တယောက်တည်း ရှိနေတုန်း ဒေါက်ဒေါက်နဲ့တံခါးခေါက်သံကြားတယ်။ တံခါးကို ကြည့်တော့လည်း ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ နောက် ခဏကြာတော့ ဒေါက်ဒေါက် ကြားရပြန်ရော။ တံခါးဖွင့်ပြီး အပြင်ထွက်ကြည့်တော့လည်း ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ နောက် ဒေါက်ဒေါက်ကြားရပြန်တော့ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ကိုစိုင်းတို့ ၊ ကောင်းကောင်းတို့စနေသလားပေါ့။ သူတို့ အခန်းသွားရှာတော့လည်း သူတို့ တွေ ညစာသွားစားတယ်တဲ့။ အခန်းတွေက ကပ်နေတော့ တခါတလေ ဘေးခန်းက အသံတွေကို ကိုယ့်အခန်းကလို့ထင်မိတတ်တယ်။ ညစာစားတဲ့သူတွေ ပြန်လာတော့ အဲဒီအကြောင်း ပြောပြတော့ မေသူက ဟုတ်လို့ လား အမ၊ ဒီနေရာက ကြားရတာမလားတဲ့။ ဟုတ်တယ် အဲဒီထောင့်နားလေးကပဲ။ နောက်တော့မှ သိရတာက သူတို့တရုတ်တွေက QQ နဲ့chat ကြတယ်။ gtalk မှာဆို တတုန်တုန်မြည်ပေမဲ့ QQမှာက ဒေါက်ဒေါက်လို့မြည်တယ်။ အဲဒါကို မသိတော့ တံခါးလာလာခေါက်တယ်လို့ထင်နေတာကိုး။
တခါက ညနေစောင်း team 11 အခန်းမှာ တယောက်တည်း ရှိနေတုန်း ကွန်ပြူတာနှိပ်သံ တဖျောက်ဖျောက်ကြားတယ်။ အခန်းပတ်ပတ်လည်ခုံတွေပေါ်မှာက desktop computer တွေ။ အလယ်အဝိုင်းခုံတွေမှာက laptop တွေ တင်ထားကြတာ။ ကိုယ်က desktop ကို သုံးနေတာ။ အသံက အဝိုင်းခုံထားတဲ့ laptop တွေဆီက အသံ။ လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ပျောက်သွားပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့လည်း တခြားအခန်းက အသံကိုလည်း ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တတ်သေးတာမလား။ error တက်နေလို့လူက ကွန်ပျူတာထဲ ဝင်လုမတတ်။ error နဲ့အသည်းအသန် နပန်းလုံးနေတာ။
မေသူရောက်လာတော့မှ အမတယောက်တည်းလားတဲ့။ အင်းဆိုတော့ အမ ဒီအခန်းက ဒေးဗစ်အခန်းလေဆိုတော့မှ ဘုရား ဘုရား ကြောက်လိုက်တာ။ အစကတော့ error နဲ့နပန်းလုံးနေတော့ ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိ။ သိတော့မှ ကြောက်လိုက်တာ။ နောက်ဆို အဲဒီအခန်း ဘယ်တော့မှ တယောက်တည်း မသွားတော့ဘူး။
စင်္ကာပူမှာတော့ သရဲလိုက်ရှာတဲ့ အဖွဲ့ ရှိတယ်။ (ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကို ဖတ်ပြီး လုပ်ထားတာ။ ကျေးဇူး ကိုညီလင်းသစ်။) သရဲရှာတဲ့ စက်ကလေးက သရဲ ရှိနေရင် စက်ကလေးက ပြတယ်တဲ့။ စင်္ကာပူက သရဲလိုက်ရှာတဲ့ အကြောင်း တင်ဆက်ထားတဲ့ ဂျာမန်ရုပ်သံသတင်းကို yahoo မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် လက်တို့ ပြီး သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ စန်းထွန်းကိုတော့ အဖေါ်လိုက်ဖို့မခေါ်လေနဲ့ ။ မလိုက်ရေးချ မလိုက်။ မီးမီး ကြောက်ကြောက် :P။
ဇူလှိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၁။
အမေရိကားကို ကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတော့ အိမ်က တို့ အတွက် ဗေဒင်တွက်ပေးတယ်။ ဘာတွေဟောလဲ မမှတ်မိတော့ပေမဲ့ နှစ်ခါလုပ်မှ အောင်မြင်မယ်လို့ဟောလိုက်တာပဲ မှတ်မိတယ်။ (ကောင်းတာတွေပဲ မှတ်မိတယ် ဆိုးတာတွေကို မေ့သွားရော :)။ )ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို အွန်လိုင်းကနေ နှစ်ခါ ဖြေရတယ်။ ပထမအကြိမ် ဖြေတုန်းက မေးခွန်းကို ကြည့်ပြီး ဘာဖြေရမှန်း မသိလို့စာတွေ ပြန်ဖတ်နေတာနဲ့အချိန်စေ့သွားရော။ ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ စနေနေ့ရုံးမှာ။ တပတ်ခြား စနေနေ့ တဝက်ရုံးတက်ရတဲ့ရတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာ။ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ပဲ သတင်းတွေ၊ ဖေ့ဘွတ်တွေ၊ ဝထ္ထုတွေ၊ ဘလော့တွေကို အေးအေးဆေးဆေး နားအေးပါးအေး ဖတ်တော့တာ။ သူဌေးတွေ မရှိတော့ ထင်တိုင်း ကြဲကြလေသတည်းပေါ့။ ဒီတခါတော့ သေသေချာချာဖြေတော့ အောင်ပါလေရော။
အောက်တိုဘာမှာ ဝင်ခွင့်ရပေမဲ့ ဗီဇာလျှောက်ဖို့I20 form ပို့ ပေးတာက စက်တင်ဘာမှာ။ ရုံးကိုတလနိုးတစ်မပေးရင် တလစာလျှော်ရမှာလေ။ လျှော်စရာ ပိုက်ဆံက မရှိ။ ဒါနဲ့ဖေဖေါ်ဝါရီကို ရွှေ့ လိုက်တာ့ I20 form ကို နောက်တကြိမ် ပြန်ပို့ ပေးရပြန်ရော။ ဗီဇာ မလျှောက်ခင် Visa Waiver Program ထဲ ဝင်ပြီး ပိုက်ဆံတရာကျော် သွင်းရသေးတယ်။ တခါလျှောက်ရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ရာအပြင် တက္ကစီဖိုး၊ မုန့် ဖိုး၊ ဓာတ်ပုံဖိုး။ မနက် ၇ နာရီလောက်ကတည်းက သံရုံးအပြင်မှာ ငုတ်တုတ် စောင့်ရတာ။ ဒါတောင် အင်တာဗျူးအတွက် appointment ယူပြီးသား။ ရဲတိုက်ကြီးလို ခံ့ညားလှတဲ့ သံရုံးထဲရောက်တော့လည်း စောင့်။ cash တို့ ၊ net ကဒ်နဲ့ပေးလို့မရဘဲ ဘဏ်ကနေ traveller cheque တို့ နဲ့ ပဲ ပေးလို့ ရတာ မသိလို့ဘဏ်ကို တက္ကစီနဲ့ပြေးပြီးဝယ်။ တနာရီအတွင်း အပြေးပြန်လာ။ ပြီးရင်လည်း စစ်လိုက်ဆေးလိုက်တာ တရားခံကို စစ်နေဘိအလား။ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း နေ့ တဝက်လောက် သွားရော။ အောင်မလေး တော်ပါသေးရဲ့ဗီဇာကို နှစ်ခါမလျှောက်ရဘဲ တခါတည်းနဲ့အောင်လို့ ။ နောက်တခါများ ထပ်လျှောက်ရရင်တော့ မလွယ်ကြောပဲ။
ကျောင်းရောက်လို့ရေးဖြေစားမေးပွဲကိုလည်း နှစ်ခါဖြေမှ အောင်တယ်။ ဘာသာတခုကိုလည်း အမှတ်နည်းသွားလို့နောက်တကြိမ် ပြန်တက်ရပြန်ရော။ တောက် ဗေဒင်မှားအောင် လုပ်မယ်ဆိုမှ မှန်သွားပြန်ပြီ :D ။
ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာရင်တော့ နှစ်ခါလျှောက်စရာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။ offer နှစ်ခုရမှာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဟိုဟာရွေးရနိုး ဒီဟာရွေးရနိုး ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်သေး :D ။ နောက်တခုကတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ မပြောတော့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ ကြတော့မှ လက်တို့ ပြီးသာ မေးလိုက်ပါ။ ပေါရဲလိုက်တာနော်။ သည်းခံပြီး ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ။ သူ့ ခမျာ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဘလော့ကနေ ရင်ဖွင့်နေရတာမလား :P ။
ဇူလှိုင် ၉၊ ၂၀၁၁။
မနေ့ က သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချက်တော့ အလုပ်အသစ်ပြောင်းပြီ လစာတော့ အကောင်းစားမဟုတ်ဘူးအမတဲ့။ လူတိုင်း လိုချင်တာက ကုမ္ပဏီကြီးကြီး၊ လစာကောင်းကောင်းမှာ လူတိုင်း လိုချင်ကြတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာက အင်တာဗျူးမှာ အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်တာပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လို့ မှ မရတာနော်။ သူတို့ ရွေးတာကို ခံရတာလေ။ တခါတလေ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိရင်တော့ offer ပေးတဲ့ အထဲကမှ ကောင်းမယ်လို့ထင်ရတာကို ရွေးရတာမလား။ အလုပ်ထဲမှာ ကြိုးစားလုပ် ဒါပဲ တတ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကံပဲပေါ့။
ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်း၊ လစာကောင်းကောင်းရတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး ငါ့ကျတော့ ဘာလို့ မရပါလိမ့်လို့တခါတလေ တွေးမိပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေသေးတဲ့သူတို့ ကို မြင်ရတဲ့အခါ ကံကောင်းသေးတယ်လို့တွေးမိတယ်။ အမြင့်ကို ကြည့်ရင် မောပြီး အောက်ကို ကြည့်ရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အမြဲကြိုးစားနေတဲ့သူအတွက် အခွင့်အရေးတို့ ၊ တက်လမ်းတို့ဆိုတာ တချိန်ချိန်တော့ ရှိလာမှာပါ။ မကြိုးစားဘူးဆိုမှသာ တကယ်ဆုံးရှုံးသွားတာ။
အလုပ်မရှိတာထက်စာရင် လစာနည်းနည်းပဲရရ အလုပ်ကလေးရှိတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ အလုပ်တခုခုရှိနေမှ ဘဝလေးဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတာပါ။ ကျန်းမားရေး ကောင်းတာကလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ စားချင်တာကို စားနိုင်တာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ အဖေ အမေလို့တစရာ မိခင်၊ ဖခင်တွေ ရှိတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ၊ ရန်ဖြစ်ရမဲ့ ညီအကို မောင်နှမ ဆွေမျိုးတွေ ရှိတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ ရင်ဖွင့်ရမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေပေးတဲ့ လူတွေရှိတာလည်း ဝမ်းသာပါ။ သူတို့ ကြောင့်သာ ဘဝမှာ အခက်အခဲကို ခံနိုင်ရည်စွမ်း၊ သည်းခံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာတာမလား။ လူ့ ဘဝဆိုတာကို သင်ပေးတဲ့ သူတွေရှိတာလည်း ဝမ်းသာလိုက်ပါ။ ဝါသနာပါတာတွေ လုပ်နေရတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ ထမင်းနပ်မှန် စားနေရတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ စာတွေ ဖတ်တတ်တာလည်း ဝမ်းသာစရာပါ။ အသည်းကွဲနေရင်လည်း မကြာခင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ တယောက်ရမှာမို့ လို့ဝမ်းသာလိုက်ပါ :)။ ရှာကြံရင် ဝမ်းသာစရာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ရှာကြံပြီး ဝမ်းသာနိုင်ကြပါစေ။
ဇူလှိုင် ၈၊ ၂၀၁၁။
သြဂုတ်၂ ရက်မှ ကျောင်းတက်ရပေမယ့် ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့ကျောင်းအပ်ရမှာမို့အဲဒီမတိုင်ခင် အပြေးအလွှား စင်္ကာပူကို ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းအပ်ရမယ့် မနက် ၈နာရီခွဲလောက် clementi က ကျောင်းရှယ်တယ်ရှိတဲ့နားမှာ သွားစောင့်။ ပြား ၆၀ ပေးစီး၊ ထိုင်ခုံပြည့်နေလို့ ကတော့ ကားတံခါးပိတ်ပြီး နောက်တစီးစောင့်ပဲ။ ရန်ကုန်မှာလို မတ်တပ်ရပ်စီးချင်တာတောင် မရ။ ကျောင်းရောက်တော့လည်း security counter မှာ မေးပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းသွားပြီး စနစ်တကျ ကျောင်းအပ်။ ပြီးရင် ICA သွားပြီး student pass လျှောက်။ ဘဏ်ကိုသွားပြီး student loan လျှောက်။
ကျောင်းဖွင့်လို့အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ဘယ်အခန်း ဘယ်အုပ်စု သတ်မှတ်ပြီးသားပဲ။ ကျောင်းသား ၁၀၀မှာ မြန်မာက ၆၀ကျော်၊ တရုတ်က ၂၀ကျော်၊ ဘရူနိုင်းက အရာရှိတွေက ၁၀၊ အိန္ဒိယ ၃၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၊ အင်ဒိုနီးရှား ၃၊ အီရန် ၁၊ စင်္ကာပူ ၁။ ကိုယ်တို့ အုပ်စုမှာက မြန်မာ ၅ယောက်၊ တရုတ် ၃ယောက်။ စာသင်တဲ့အခန်းက theatherမှာ။ စာသင်ပြီးရင် ကိုယ့် discussion room ထဲ သွားနေ။ locker တယောက်တခုစီ ရတယ်။ locker ထဲမှာ စာအုပ်တွေ၊ မုန့် တွေ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဘူးတွေ၊ ဖိနပ်တွေ အကုန်ထားတာ။ ကော်ဖီ၊ တီး အကုန်ရှိတယ်။ စာသင်ချိန်မှာ အိပ်ငိုက်လို့ ၊ ဗိုက်ဆာလို့နဲ့တနေ့ တနေ့သောက်လိုက်တဲ့ ကော်ဖီ။ အလကားမို့ သာပဲ တခွက်တကျပ် ဆိုရင်တော့ မွဲပြီ။ ကျောင်းကရေက ရေသန့် မို့ လို့ အိမ်က ရေထက် သောက်လို့ ကောင်းတယ်။ ကျောင်းကပြန်ရင် ရေဗူးအပြည့် ရေသယ်တယ်။ ကျောင်းတွင်းပြေးတဲ့ shuttle ကို အလကားစီးလို့ ရတယ်။ Business School၊ Library တို့သွားချင်ရင် shuttle A ၊ B စီးရုံပဲ။
ရှေ့ တန်း - အိကေခိုင်၊ ဆွေဆွေဆက်နိုင်၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း၊ စန်းစန်းထွန်း၊
Wang Wan Fu
နောက်တန်း Zhao Tian Ming ၊ Zhao Yan
Team 12 SA 29
ကျောင်းသားကဒ်က နှစ်ကဒ် ရတယ်။ ISS နဲ့NUS။ Library မှာ စကားမပြောရ။ တိတ်ဆိတ်နေလို့တခါတလေ ကောင်းကောင်းအိပ်ချင်ရင် Library မှာ သွားနှပ်ကြတယ်။ security က လာနှိုးတယ်။ ကျောင်းက အင်တာနက် connection က ပိုကောင်းလို့တရုတ်တွေဆို ကျောင်းမှာ ရုပ်ရှင်လာကြည့်ကြတယ်။
printer ကလည်း free။ ကြိုက်သလောက်ထုတ်။ printer မှာ စာရွက်ကုန်နေလို့security counter မှာ ကျောင်းသားကဒ်ပြလိုက်ရင် A4 တထုပ်ပေးတယ်။ ကျောင်းကဟာတွေ အမကောင်းတာ ဟိုတလောက အိမ်ပြောင်းတော့ ပစ္စည်းတွေ ရှင်းကြတော့ တွေ့ တာက A4 တထုပ်။ ည ၁၀နာရီကျော်မှာ ကျောင်းကနေ clementi mrt အထိ shuttle ရှိတယ်။ နောက်ဆို နောက်ဆုံးကား ည ၁၁နာရီ ၃၅ ကား နဲ့ ပဲ ပြန်ကြတော့တယ်။ တခါတလေ project မပြီးလို့ကျောင်းမှာတောင် ညအိပ်ရတာတောင် ရှိတယ်။ အဲဒီညတွေမှာ လက်ဖက်သုပ် သုပ်စားရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းမှကောင်း။
သင်္ဂီဘ၊ အိဖြူဝင်း၊ အောင်ကျော်ဇင်မြင့်၊ ဇော်မျိုးအောင်၊ ကောင်းကြည်သူ၊
စိုင်းရန်လင်းအောင်း၊ စန်းထွန်း၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း
စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာလည်း ကျောင်းမှာ။ ကိုဇော်မျိုးအောင်က ဟင်းချက်ကောင်းတယ်။ သူချက်လာရင်တော့ဝိုင်းတီးကြတာပေါ့။ တို့ တွေအုပ်စုက မိန်းကလေးတွေက မချက်တတ်ဘူးလေ အိအိကလွဲရင်။ ကိုဇော်မျိုးအောင်က ကြက်သားချက်မှာမို့ လို့ထမင်း၆ယောက်စာလောက် ချက်ဖို့ဘကို ခိုင်းတယ်။ အလွယ်ဆုံး ဆန်ကို ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်ပြီး ချက်တာကို ဘက ဆန်မရှိလို့ နဲ့အင်းအဲ လုပ်နေလို့ ။ သူချက်လာတော့လည်း ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီး ဝိုင်းတီးကြတာပေါ့။ ပန်းကန်ဆေးတာ မပြောင်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ကိုဇော်မျိုးအောင်ကို သူများဆေးတာ မကြိုက်ရင် သူ့ ဘာသာ ဆေးပေါ့နဲ့မကြားတကြား ပြန်ပတ်နေတာ။ ပေါ်တင်လည်း မပြောရဲဘူးလေ သူချက်လာတာမလား။
တို့ အုပ်စုထဲက မိန်းကလေးတွေက မိန်းကလေးမဆန်သလောက် ယောက်ျားလေးတွေက စည်းစနစ်ရှိပါတယ်။ project paper တွေကို ဘက ကြက်ယက်သလို ယက်ပြီး ရှာလို့ ဖွသမျှကို ကိုစိုင်းက သိမ်းရတာ။ ဟိုဟာ မေ့ကျန်၊ ဒီဟာ မေ့ကျန်ရင် ဘ၊ ပြည့်ပြည့်၊ စန်းထွန်း။ ကိုစိုင်း၊ ကောင်းကောင်း၊ အေကေ၊ ကိုဇော်မျိုးအောင်တို့ က သိမ်းပေးရတာ။ တခါက ဘက လမ်းလျှောက်တာ လိမ်လျှောက်နေလို့ကိုစိုင်းက ဟဲ့ကောင်မလေး နင့်ဖိနပ်ပြဆိုလို့ပြတော့ ဒေါက်မရှိတော့ဘူးလေ။ ဒေါက်မရှိလို့ဘဲသွားသလို ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်နေတာကို မသိဘူးလေ။ စီးတဲ့သူက မသိဘဲ ကိုစိုင်းပြောမှ သိလို့ဘ့ မှာ ရှက်လိုက်တာလေ။
Zhao Tian Ming ၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း၊ ဆွေဆွေဆက်နိုင်၊ စန်းထွန်း၊ မေမြတ်သူ၊
အိကေခိုင်၊ Zhao Yan ၊ Wang Wan Fu
ကျောင်းက team work လုပ်တတ်အောင် သင်ပေးတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် team နဲ့ ပဲ။ တယောက်တည်း အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ အရာရာ team နဲ့လုပ်တတ်မှ အောင်မြင်မှာလေ။ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်ချင် team နဲ့အရင်တိုင်ပင်ရတယ်။ အစကတော့ ငြင်းကြခုန်ကြ။ နောင်တော့ ဘာလာလာ agree ပဲ။ ငြင်းခုန်ရမှာ မောလွန်းလို့ ။ တို့ team မှာက မြန်မာနဲ့တရုတ်တွေပဲဆိုတော့ assignment တခုပေးရင် မြန်မာတွေက ခေါင်းချင်းဆိုင် အရင်တိုင်ပင်၊ ပြီးမှ တရုတ်တွေကို english နဲ့ ပြော။ တရုတ်တွေက တရုတ်လိုပြန် ကွိစိကွစိ ငြင်းကြ၊ ပြီးရင် တရုတ်တယောက်က english လို ပြန်ပြော။ များသောအားဖြင့် အချိန်တွေက ဘာသာပြန်နေတာနဲ့ ကို ကုန်နေတာပဲ။
အမေးအမြန်းထူတဲ့မိုက်ကယ်တယောက် ရှေ့ ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ငိုက်ပြီး ဇက်ကျိုးနေတာ။ နှိုးတာနဲ့မေးခွန်းမေးလို့တို့ တွေမှာ ရယ်လိုက်ကြတာ အိပ်ငိုက်တာတောင် မေးခွန်းမေးမပျက်လို.။
စန်းထွန်း၊ ဆွေဆွေဆက်နိုင်၊ မေမြတ်သူ၊ Zhao Yan ၊ အိကေခိုင်၊ Wang Wan Fu
ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း ၊ Zhao Tian Ming
တရုတ်တွေက ညစ်ပတ်တယ်။ အင်္ကျီတထည်ကို ၃ရက်လောက် ဝတ်တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာက အေးတော့ ချွှေးမထွက်တော့ ဟုတ်တာပေါ့။ စင်္ကာပူမှာက ဒီလောက်ပူတဲ့ဟာကို။ အုပ်စုထဲက အငယ်တရုတ်လေးကို မေးတော့ သူရော၊ သူ့ မိသားစုရော အင်္ကျီလဲပါတယ်တဲ့။ အငယ်တရုတ်မလေးကတော့ အင်္ကျီဖြူတထည်ကို တပတ်လောက် မဲနေအောင် ဝတ်တယ်။ အဲ presentation တွေ ဆိုရင်တော့ ပျံနေအောင် ဝတ်တယ်။
အိအိတို့အုပ်စုထဲက တရုတ်လေးကတော့ သူတက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်တလျှောက် အင်္ကျီနှစ်ထည်ပဲ၊ ဘောင်းဘီနှစ်ထည် ရှိပါသတဲ့။ အင်္ကျီဆိုလည်း ဈေးကြီးတဲ့ ဘောလုံးသမား အင်္ကျီတွေ။ ဘယ်ဓာတ်ပုံကြည့်ကြည့် အဲဒီအင်္ကျီတွေပဲ။ သူတို့ ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က အချိန်လေးစားတာ။ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်မရောက်မှီ ၁၀မိနစ်လောက်ကတည်းက ရောက်နေတတ်တယ်။ သူတို့ ကျောင်းမှာ ကတည်းက အဲလို ဖြစ်အောင် train ထားတာတဲ့။ မြန်မာတွေကတော့ ချိန်းတာထက် အမြဲနောက်ကျ။ ကိုစိုင်းက ဆူတတ်တယ် နင်တို့ တွေ ချိန်း ပြီးရင် နောက်ရွှေ့တရုတ်တွေက ရောက်နှင့်နေပြီ။ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံမို့ လို့ဘုရားမယုံကြည်ဘဲ လက်တွေ့ သိပ္ပံကိုသာ ယုံကြသတဲ့။
Zhao Yan ၊ အိကေခိုင် ၊ Wang Wan Fu ၊ Zhao Tian Ming ၊ စန်းထွန်း၊
မေမြတ်သူ၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း ၊ ဆွေဆွေဆက်နိုင်
တခါတလေလည်း စိတ်တိုတာ၊ ဒေါသထွက်ရတာတွေ ရှိတာပေါ့။ ကောင်းကောင်းက ငါ ငါ့တို့ အုပ်စုထဲက တရုတ်မကို ဆဲခဲ့တယ်။ ဟယ် ဟုတ်လား ဘယ်လို ဆဲခဲ့လဲပေါ့။ ဟီးဟီး ခွေးစုတ်မတဲ့ ။ ဟိုက ဆဲတယ် မထင်ဘဲ ရီသွားတယ် ထင်ဦးမယ်။
အအေးပိုင်းက လာတဲ့ တရုတ်တွေနဲ့အပူပိုင်းက လာတဲ့ မြန်မာတွေ အဲဒီမှာ စတွေ့ ကြတာပေါ့။ တရုတ်တွေက ပူလို့အဲကွန်းကို တင်လိုက် အအေးမခံနိုင်တဲ့ မြန်မာတွေက အဲကွန်းကို လျှော့လိုက်နဲ့ကြုံသူဦးစတမ်း။ အဲကွန်းခမျာ အကောင်းမနေရ လာတိုးလိုက် လာလျှော့လိုက်နဲ့ ။ လူသာဆိုရင် ထရိုက်မယ်။
project ပြီးလို့presentation မှာ team က လူအကုန် presentation လုပ်ရတယ်။ လူအများရှေ့မှာ ထွက်ပြောရတော့ စစချင်း ရင်တွေပန်းတွေတုန်၊ အသံတွေထစ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူရှေ့ ထွက်ရတာ့ အနည်းနဲ့ အများ ရှော့ ရှိတာပါပဲ။ presentation နေ့ ဆို အကုန် formal dress တွေနဲ့လှနေတာ။
စန်းထွန်း၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း၊ အိကေခိုင်၊ မေမြတ်သူ ၊ Zhao Yan ၊
Wang Wan Fu ၊ Zhao Tian Ming
စန်းထွန်းရဲ့ locker ထဲမှာ ဒေါက်ဖိနပ်တရန်ရှိတယ်။ presentation နေ့ ဆို locker ထဲက ဒေါက်ဖိနပ်ကို ထုတ်စီး ပြီးရင် locker ထဲ ပြန်သိမ်း။ shuttle စီးတဲ့နေ့ ဆို လမ်းသိပ်မလျှောက်ရတော့ ဒေါက်ဖိနပ် စီးဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့်က နောက်ဆုံးကားနဲ့ပြန်တာဆိုတော့ ကျောင်းကနေ ကားမှတ်တိုင်အထိ ၁၀မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ကျောင်းက တောင်ကုန်းပေါ်မှာဆိုတော့ ကျောင်းရှေ့ ရောက်ရင်တော့ ဟောဟဲပဲ။ နေ့ တိုင်းလမ်းလျှောက်ရတော့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ဘယ်ရှိုးထုတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ formal dress ဝတ်တဲ့နေ့ ဆို အပေါ်က formal အောက်ကခြေညှပ်ဖိနပ်နဲ့အတော်ကိုးရိုးကားယားနိုင်တဲ့အဖြစ်။ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ကွန်ပျူတာက တဖက် ဘယ်လိုလုပ် ပဲများနိုင်ပါ့မလဲ။ တွေ့ ရှိချက်အရ mrt က စက်လှေကားတွေက အမြန်ဆုံးပဲ။ ဒါကိုတောင် နှေးတယ်ထင်ပြီး ပြေးတက်နေတာ နောက်ဆုံးရထားမှီအောင်။
စင်္ကာပူက ဖိနပ်ဘယ်လောက်စားလဲဆိုရင် ဘယ်တော့မှ မပြတ်တဲ့scroll ဖိနပ်အထူတောင် ပါးရောပဲ။ တရန်ဆို ၃လ ခံရင် အတော်ဟုတ်နေပြီ။ မကြီးက bata က ဖိနပ်လေး ဝယ်ပေးထားတယ်။ အဲဒီဖိနပ်ကတော့ အတော်ခံ မပြတ်လို့အမုန်းစီးရတယ်။
ကောင်းကြည်သူ၊ အေးသော်တာနိုင်၊ သင်းယုထွေး၊ စန်းထွန်း၊ သီရိခင်မောင်ထွေး၊
NUS Business School က canteen မှာ တုံယမ်းဟင်းချိုနဲ့young to fu က အတော်ကောင်းတယ်။ Art & Science School က ကုန်းဘောင်ကြီး၊ မာလာကြီးနဲ့steam boat ကောင်းတယ်။ တပွဲ ၅ ကျပ် steam boat ကို ဈေးများတယ်ဆိုပြီး ထမင်းတပွဲ ထပ်ဝယ်ပြီး တယောက်တဝက် စားကြသေးတာ။ steam boat မှာလည်း ပုဇွန်ဆိုနှစ်ကောင်၊ အသားတုဆိုနှစ်လုံး ထည့်ပေးတော အဝေမတတ်လို့ရန်ဖြစ်စရာ မလိုဘူး။ Engineering School က canteen က နာမည် အကြီးဆုံးပဲ။ ကိုရီးယားစာ၊ ဂျပန်စာ အကုန်ရတယ်။ နောင် အလုပ်လုပ်တော့မှ ကျောင်းက အစားအစာတွေက အရသာရှိပြီး ဈေးချိုမှန်း သိတာ။ တခါတလေ ကျောင်းကိုပြန်ပြီး အဲဒါတွေ စားချင်မိတယ်။
စာမေးပွဲဖြေရင်တော့ NUS hall ထဲမှာ ဖြေရတယ်။ အမှတ်စာရင်းကိုလည်း စာအိတ်နဲ့အသေအချာ ပေးတာ။ အားလုံး ၂.၂ ရမှ အောင်တာ။ အမှတ်မမှီရင် ကျောင်းမှာ နေခိုင်းပြီး project တွေ လုပ်ခိုင်းတယ်။ ပြီးရင် course ပြီးဆုံးအောင် တက်ခဲ့ကြောင်း certificate ပေးတယ်။ အားကစားခန်းမတွေ သွားကစားလို့ရပေမယ့် အားကစားဆို ဝေးဝေးက ရှောင်လို့အားကစားခန်းမဘေးက တခါပဲ ဖြတ်သွားဖူးတယ်။
သီရိခင်မောင်ထွေး၊ အေးသော်တာနိုင်၊ စန်းထွန်း၊ အိဖြူဝင်း၊ သင်းယုထွေး၊ ကောင်းကြည်သူ
Graduation Day AD Project Team 2
internship မဆင်းခင် တလအလိုမှာ ကျောင်းမှာ AD project လုပ်ရတယ်။ ရုံးချိန်အတိုင်း ရုံးတက် ရုံးဝတ်စုံဝတ်ရတယ်။ ဒီကျောင်းရောက်မှပဲ team work ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိသွားတော့တယ်။ ပြီးရင် ကျောင်းကလွှတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ internship ဆင်းရတယ်။ allownce ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ အပတ်တိုင်း report ရေးပြီး supervisor ဆီ တင်ရတယ်။ internship ပြီးရင် ကျောင်းကို ပြန်လာပြီး ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ presentation ပေးရပြန်တယ်။ documentation ကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်. project ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း documentation ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာလေ။ error တက်နေရင် အခန်းပေါက်စေ့လိုက်ပြီး error ရှင်းခိုင်းတာ။ တယောက်ယောက်ကတော့ ရှင်းပေးသွားတာပဲ။
ကျောင်းက ကြည့်ရင် သေးသလို ထင်ရပေမယ့် အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်း၊ အခန်းဖွဲ့ စည်းထားပုံ၊ အလင်းရောင်ရအောင် တည်ဆောက်ထားပုံတွေက အတော်ကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းမှာ graduate diploma in system analysis ၊ master of software engineering, knowledge engineering ၊ diploma in project management တွေ ရှိတယ်။ နာမည်ကြီးလို့ဘရှုနိုင်းက အရာရှိတွေကို အစိုးရက ပညာတော်သင် လွှတ်တယ်။ ဘရှုနိုင်းနိုင်ငံက ချမ်းသာတော့ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားတွေကို အထောက်အပံ့ ကောင်းကောင်းပေးတယ်။ အဲ စာမေးပွဲကျလို့ ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးတာတဲ့။ တခြားနိုင်ငံက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက် သင်တန်းတွေ ရှိတယ်။
အောင်ကျော်ဇင်မြင့်၊ အိဖြူဝင်း၊သင်းယုထွေး၊ သီရိခင်မောင်ထွေး၊
အေးသော်တာနိုင်၊ စန်းထွန်း၊ ကောင်းကြည်သူ
အေးပို ၊ အီးတီ (အိဖြူခိုင်)၊ စန်းထွန်း Internship Team 19
သိင်္ဂီဘ၊ ခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း၊ ဇာခြည်ကျော်၊ စန်းထွန်း၊ အိကေခိုင်၊ အိဖြူဝင်း
Internship Project last reporting day
Feb 16, 2009 Internship Briefing Day
ပညာတွေ အများကြီးရ၊ စိတ်ညစ်ဖို့ လည်းကောင်း ပျော်စရာလည်းကောင်းတဲ့ကျောင်းကြီးကို သတိရမိပါတယ်။
၆ ဇူလှိုင် ၂၀၁၁။